တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: December 2006
စိတ်ညစ်တယ် … ။
လူတိုင်း ခဏခဏ ပြောဖူးကြတဲ့ စကားပါ။ ကျမဆိုလည်း မကြာခဏ ပြောနေကျပေါ့။
တစုံတခု အလိုမကျရင် … အလိုမပြည့်ရင်၊ ဒါမှမဟုတ် တစုံတယောက်ရဲ့ ပယောဂကြောင့် ကျမတို့ဟာ စိတ်ညစ်တတ်ပါတယ်။ စိတ်ညစ်ပြီဆိုရင်ဖြင့် ကျမတို့ရဲ့ စိတ်တွေဟာ ကြည်လင်သန့်ရှင်းမနေတော့ဘူး၊ ညစ်နွမ်းလို့ပေါ့။
စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ် ပြောတဲ့စကားတွေဟာ ဂျစ်တစ်တစ် ညစ်တစ်တစ်တွေ ဖြစ်နေတတ်သလို လုပ်မိတာတွေဟာလည်း အမှားမှား အယွင်းယွင်းတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
စိတ်ညစ်တော့ အမှားပြောမိ၊ အမှားလုပ်မိ၊ အဲဒီလို အမှားတွေ ပြောမိ လုပ်မိတော့ ပိုစိတ်ညစ်ရ၊ ဒီလိုနဲ့ ကျမတို့စိတ်တွေလည်း ပြန်လည်ကြည်လင်လာဖို့ ဝေးစွ၊ ပိုပိုပြီး ညစ်ထေးလာပါရောလား။
မနေ့က တနေ့လုံး ကျမ စိတ်ညစ်နေပါတယ်။
များလွန်းနဲ့ အလုပ်နဲ့ …နှေးလွန်းတဲ့ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်ပါ။ တနေ့ကလည်း ဘလော့မှာ ပို့စ်အသစ် မတင်ဖြစ်ဘူး။ မနေ့ကလည်း ကွန်နက်ရှင်နှေးနေတာကြောင့် ဘလော့ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲ တော်တော်နဲ့ဝင်မရဘူး။ ၀င်လို့ရပြန်တော့လည်း ပို့စ်အသစ်တင်တဲ့နေရာရောက်အောင် မနည်းသွားရတယ်။ publish post လုပ်ပြီးတော့လဲ တက်သွားသလား မတက်သွားသလား ပေါ်မလာဘူး၊ ကြာလာတော့ စိတ်က မရှည်တော့ပါဘူး၊ စောင့်ရလို့ကြာတဲ့ အချိန်တွေကို စိတ်တိုလာတာနဲ့ ဟိုလုပ် ဒီလုပ်လျှောက်လုပ်လိုက်တာ ပို့စ် ၂ ခု တက်သွားပါလေရော၊ ပြန်ဖျက်ဖို့ ပြန်ဝင်ပြန်တော့ နှေးနေပြန်ရော … ။
ကဲ … စိတ်ညစ်ပြီပေါ့။
အလုပ်များရတဲ့ကြားထဲ ကွန်နက်ရှင်နှေးလို့ စိတ်ရှုပ်နေချိန်မှာ စကားပြောနေတဲ့သူတယောက်ကို အကောင်းမပြောမိတော့ဘူး၊ သူပြောတဲ့ စကားကို နားထောင်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ခံယူချက်ကလည်း မကောင်းတော့ဘူး။ ညစ်တစ်တစ်ဖြစ်လာတော့ ဂျစ်တစ်တစ်တွေ ပြောမိရော …။ သူအကောင်းပြောလည်း ကိုယ်က နားလည်မှုမရှိစွာ စိတ်ဆိုးနေမိတယ်၊ ဆန့်ကျင်ဘက် အတွေးတွေသာ တွေးမိပြီး ရန်စကားတွေသာ ပြောမိနေတော့တယ်။
နောက် …သွေးအေးသွားတဲ့အချိန်ကျမှ ကိုယ်ပြောမိတာတွေ မှားသွားပါလား လို့ ဆိုပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပြန်ရော … ။
ကြည့်ပါဦး … ။
ပထမ စိတ်ညစ်တယ် .. ။
ပြီးတော့ .. စိတ်ဆိုးတယ် .. ။
နောက် .. စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ် .. ။
ညစ်ဆိုး မကောင်းတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကို ကိုယ်ပြန်ကြည့်မိရာက အဖေ အမြဲရွတ်ဆို နေကျ ဘုရားရှိခိုးထဲက စာသားတခုကို သွားသတိရမိပါတယ်။
အရှင်ဇနကာဘိဝံသရဲ့ ဘုရားရှိခိုးပါ။ အစအဆုံးကိုတော့ မမှတ်မိပါဘူး။
“အဟံ၊ နောက်ပူ ညစ်ရှုပ် အမြဲသေရလတ္တံ့ ဖြစ်ပါသော အကျွန်ုပ်သည်။ ၀န္ဒေ၊ လင်းလို ရှင်းလို ကိစ္စပြီး အေးကြီး အေးလိုသောအား … ၀ပ်တွားရိုကျိုး လက်စုံမိုး၍ ရှိခိုးပါ၏ မြတ်စွာဘုရား” … ဆိုတဲ့ အဆုံးပိုဒ်က စာသားလေးတော့ မှတ်မိနေပါတယ်။
မှန်လိုက်တာ … ။
ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကို ဒီစကားနဲ့ ပြန်ချိန်ထိုး ဆင်ခြင်ကြည့်မိတော့ ….
နောက် ပူ ညစ် ရှုပ် ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးလုံးဟာ …
ကြည်လင်ခြင်းမရှိတဲ့ စိတ် …
အေးချမ်းခြင်းမရှိတဲ့ စိတ် …
ဖြူစင်ခြင်းမရှိတဲ့ စိတ် …
ရှင်းသန့်ခြင်းမရှိတဲ့ စိတ် … ကို ရည်ညွှန်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီစာလုံးလေးလုံးဟာ တကယ့်ကို ကိုယ့်စိတ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။
ကျမတို့ရဲ့ စိတ်တွေဟာ အမြဲတမ်း နောက်ကျိ ပူလောင် ညစ်ထေး ရှုပ်ထွေး နေပါတယ်။
ဒီလိုအချိန် အခိုက်အတန့်မှာ ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ် အလိုမကျလို့ စိတ်ညစ် စိတ်ရှုပ်နေတာနဲ့ပဲ သူတပါးကို ဂျစ်ကန်ကန် ညစ်ထန်ထန်တွေပြောမိတာ မကောင်းဘူးလို့ တွေးမိပါတယ်။
ဒီလိုအချိန်မှာ တွေးမိမှား ပြောမိမှား ပြုမိမှားခဲ့တာတွေ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
မဆင်မခြင်နဲ့ ပြောမိ ပြုမိမှားခဲ့တာတွေကို undo လုပ်လို့လည်းမရတဲ့ ကျမတို့ဘ၀မှာ … တောင်းပန်ရုံကလွဲပြီး ဘာရှိဦးမှာလဲ။ ကျမကတော့ ကိုယ်မှားတယ်ဆိုရင် တောင်းပန်ဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး။
ကျမ စိတ်ထဲ နောက်ပူညစ်ရှုပ်နေတဲ့အတွက် … ခုလို မှားမိပါတယ် … လို့ ကြုံတဲ့အခါ ကျမ သူ့ကို တောင်းပန်ရပါအုံးမယ်။
အမှားပြင်ဆင်ချက်။ ။ ဒီမနက် အဖေ့ကိုမေးတော့ အဲဒီဘုရားရှိခိုးက အရှင်ဇနကာဘိဝံသရဲ့ ဘုရားရှိခိုး မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဒီပဲယင်းဆရာတော်ရဲ့ ဘုရားရှိခိုးလို့ပြောပါတယ်။ ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါတယ်ရှင့်။
Posted by မေဓာဝီ at 9:41 PM9comments
“၀င်းဦးကို ဘယ်လိုပေါင်းလဲ …၀ တချောင်းငင် … ပြီးတော့ဘာလဲဟင်”
အဲဒီမေးခွန်းကြားတော့ ရယ်လိုက်မိပြီး …
“၀ တချောင်းငင် တသတ် - ၀င်းဦး” လို့ ကျမရဲ့ စ တတ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် ရုတ်တရက် အဲဒီလို ခပ်နောက်နောက် ပြောလိုက်မိတယ်။
နောက်မှ ..မေးတဲ့ ကောင်မလေးကို သနားသွားပြီး စာလုံးပေါင်း အမှန်ကို ပေါင်းပြလိုက်ပါတယ်။
သူက ကျမတို့ အိမ်မှာ တောက်တိုမယ်ရ လုပ်တဲ့ ကောင်မလေးပါ။ အသက်က ၂၀ကျော်လောက် ရှိပေမဲ့လို့ စာတလုံးမှ မတတ်ပါဘူး။
ကျမတို့အိမ်ရောက်မှ ကကြီး-ခခွေး၊ တစ်နှစ်သုံးလေး ကြုံတဲ့သူက သင်ပေးကြလို့ နဲနဲပါးပါး ရေးတတ် ဖတ်တတ် ရှိလာတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သူက အားနေသူမဟုတ်တဲ့အတွက် သင်ရတာ ရှေ့သိပ်မတိုးပါဘူး။ သူ့အားသာချက်တခုကတော့ မှတ်မိလွယ်ပြီး တတ်ချင်စိတ်လည်း သိပ်ပြင်းပြတာပါပဲ။
သူဟာ ရန်ကုန်မြို့စွန်က ရပ်ကွက်တခုမှာ မွေးဖွား ကြီးပြင်းလာသူတဦးပါ။ ရန်ကုန်မြို့နေလူတယောက် အခုလို စာမတတ်ဖူးဆိုတာ ကြားရသိရတော့ စစချင်း ကျမအံ့သြမိတယ်။ ဒီကိစ္စမျိုးတွေရှိလား …. လို့ တရုတ်ကားထဲက ပေါင်ချိန်ကြီးပြောသလို တွေးမိပါရဲ့။ သူ့လို စာမသင်နိုင်တဲ့ သူတွေဆိုတာ ရန်ကုန်မြို့ဧရိယာထဲမှာတွင် တပုံတပင်ကြီးဆိုတာ နောက်တော့မှ ဖြည်းဖြည်းချင်း သိသိလာခဲ့ရပါတယ်။
အရင်ကတော့ တောမှာသာ စာမတတ်သူတွေရှိတယ်ထင်ခဲ့မိတယ်၊ ဦးသုခရိုက်တဲ့ ဘယ်သူပြိုင်လို့ လှပါတော့နိုင် ဇာတ်ကား တီဗီမှာလာလို့ကြည့်ရတဲ့အခါ အဲဒီလို ကျေးလက်တောရွာတွေသွားပြီး အ-သုံးလုံး သင်ပေးချင် စိတ် တဖွားဖွားဖြစ်မိတယ်။ တကယ်တမ်း ကိုယ့်လက်တကမ်းမှာ ဒီလိုလူတွေ အများကြီးပါပဲ။ သူတို့ ဘာလို့ စာမသင်နိုင်ကြလဲ။ စာမတတ်ကြလဲ … ။
အဓိက ကတော့ စာသင်နိုင်လောက်အောင် လုံလောက်တဲ့ ငွေကြေးမရှိလို့ပါပဲ။
“ပညာရွှေအိုး လူမခိုး” ဆိုတဲ့ စကားပုံနောက်မှာ …
“ရွှေအိုးရှိမှ ပညာရ” ဆိုပြီး နောက်ပြောင် ထည့်ပြောကြတာဟာ တကယ်ပဲ မှန်နေပါတယ်။
ပညာကို ငွေနဲ့ ဆက်ပြီး ၀ယ်ယူနေရတဲ့ခုလိုခေတ်ကြီးမှာ စာမတတ်သူများပြားလာတာဟာ ဆန်းတော့လည်း မဆန်းပါဘူး။ လဖက်ရည်ဆိုင်က စားပွဲထိုးလေးတွေ၊ ကားဂိတ်တွေ မီးပွိုင့်တွေမှာ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်းယာ၊ ဂျာနယ်၊ စပယ်ပန်း တခုခု ရောင်းနေတဲ့ ကလေးတွေ ခုနကောင်မလေးလို အိမ်တွေမှာတောက်တိုမယ်ရ ဗာဟီရလုပ်ပေးရတဲ့ သူလေးတွေ …. သူတို့လေးတွေအတွက် ကျောင်းနေခွင့် ပညာသင်ကြားခွင့်ဆိုတာ ဘယ်မှာလဲ။
၀မ်းရေးနဲ့ ပညာရေးကို ချိန်ထိုးရတဲ့အခါမှာ လတ်တလော ပြဿနာဖြစ်တဲ့ ၀မ်းရေးကိုသာ အဓိက ဦးစားပေးကြရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျမတို့ တိုင်းပြည်ကြီးမှာ စာမတတ်သူတွေ များသည်ထက် များများ လာတော့တာပါပဲ။
နိုင်ငံတခုမှာ ပညာတတ်သူရှားပါးတာဟာ နိုင်ငံရဲ့ အရည်အသွေးကျဆင်းလာတာပဲ မဟုတ်လား။ အရည်အချင်းရှိသူတွေ နည်းပါးနေတဲ့ နိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတော်သစ် ဘယ်လို တည်ဆောက်ကြပါမလဲ၊ ဒီလိုအပ်ချက်တွေကို ဘယ်လို ဖြည့်ဆည်းကြမလဲ၊ အားနည်းချက်တွေကို ဘယ်လို ပြုပြင်ယူမလဲ၊ ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိသလဲ … ကျမ မတွေးတတ်တော့ပါဘူး။
ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေး နိမ့်ကျလာမှု၊ စာမသင်နိုင်တဲ့ ကလေးတွေများပြားလာမှုကို ဒီတိုင်းကြည့်မနေနိုင်တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတချို့က တစိတ်တပိုင်း တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးကြပါတယ်။ “ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး” ဆိုပြီး အစိုးရအတန်းကျောင်းမနေနိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေက အခမဲ့ ပညာသင်ကြားပေးပါတယ်။
ဒီလိုသင်ကြားတဲ့နေရာလည်း ဘုန်းတော်ကြီးတွေအတွက် အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ စာအုပ်စာတမ်း စာရေးကိရိယာ လှူဒါန်းမဲ့သူ ရှိစေဦးတော့ ကလေးတွေ စာသင်ခန်းထဲရောက်အောင် လုပ်ဖို့က သိပ်မလွယ်လှပါဘူး။
စာသင်မဲ့ အချိန်မှာ ဈေးရောင်းရင် ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရမယ် … ဆိုတာမျိုးလောက်သာ နားလည်ထားကြတဲ့ လူများစုကို စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ ဆိုတာကလည်း ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ အပြောအဟောနဲ့ ဆွဲဆောင်နိုင်မှုပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ ဒီလိုပြောရင်း ဟောရင်းနဲ့ပဲ လမ်းပေါ်က ကလေးတယောက်တလေပဲဖြစ်ဖြစ် စာသင်ခန်းထဲ ရောက်သွားရင် အကျိုးရှိတာပါပဲ။
မြန်မာတွေရဲ့ ပညာရေးအစဟာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကလို့ ဆိုရင်ရပါတယ်။ ကျမတို့မမီလိုက်သော ဟိုးအရင်ခေတ်က မိဘတွေဟာ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ ကလေးတွေကို ဘုန်းကြီးကျောင်းပို့ပြီး ပညာသင်စေကြတာပဲ မဟုတ်လား။ သင်ပုန်းကြီး၊ အတွင်းအောင်ခြင်း၊ အပြင်အောင်ခြင်း၊ မင်္ဂလသုတ်၊ နမက္ကာရ၊ လောကနီတိ .. စသဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ သင်ရိုးအတိုင်း သင်ကြရတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းထွက် ကလေးတွေဟာ မြန်မာစာအပြင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဘာသာရေးအခြေခံပါ သူတို့ခေါင်းထဲ စိမ့်ဝင်သွားကြတယ်။
အခုခေတ်ရဲ့ စမ်းသပ်ဆဲ ခေတ်မီပညာရေးစနစ် လက်အောက်က ကလေးတွေကတော့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် အောက်ကလိအာ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဘာသာရေးအခြေခံလည်း မသိ နားမလည်၊ အင်္ဂလိပ်စာဆိုတော့လည်း ဟုတ်တိပတ်တိ မတတ်၊ သင်ရတဲ့စာတွေကလည်း အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ၊ ကျမတို့သည်လည်း ဒီစနစ်လက်အောက်ကနေ ကြီးပြင်းလာကြရတာမို့ ဘွဲ့သာရသွားရော ကိုယ်အထူးပြုယူခဲ့တဲ့ ဘာသာရပ်ကို ဘာတခုမှ အသုံးမချနိုင်ဘဲ မတတ်တတတ်သာ ကျေနပ်ခဲ့ရသူပါ။
ကျမတို့ခေတ်နဲ့ ခုလက်ရှိအခြေအနေ ကွာဟချက်ကတော့ …
တော်ရုံတန်ရုံ တတ်နိုင်တဲ့သူတွေက အစိုးရစာသင်ကျောင်းတွေနေကြ၊ ဒီထက်ပိုတတ်နိုင်တဲ့သူတွေက နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စာသင်ကျောင်းတွေဆီသွားကြ၊ ဒီထက်ဒီ တတ်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားပို့ပြီး ပညာသင်စေလွှတ်ကြ …
လုံးဝမတတ်နိုင်တဲ့ သူတွေကတော့ …. ခုနကောင်မလေးလိုမျိုးတွေပေါ့။
သိပ်မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းက တက္ကသိုလ် ဆရာဟောင်းတယောက်နဲ့ လဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်း ထွေရာလေးပါး ပြောရာက ပညာရေးအကြောင်းရောက်သွားပါတယ်။ ဆရာက ကျောင်းက အနားယူခဲ့တာ ဆယ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ၁၉၉၆ နောက်ပိုင်းကတည်းကဆိုပါတော့။ သူ အနားမယူခင်ကာလက နိုင်ငံတော်အစိုးရက ပညာရေးဘက်မှာ အားပေးမှုတွေလုပ်နေတော့ သူက ကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်လေးတွေ အစည်းအဝေးတခုမှာ ထပြောမယ်လို့ဆိုပြီး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဆရာတယောက်ကို ပြောပြသတဲ့။ အဲဒီဆရာက
‘ဟာ .. ဆရာရယ် .. မလုပ်ပါနဲ့ … သူ့ဟာသူ ချောက်ထဲသွားတဲ့ လမ်းကိုသွားနေတာ သွားပါစေ၊ သူ့ဟာသူဆိုရင် သုံးလေးနှစ်လောက် မြဲမဲ့ဟာ ဆရာလုပ်မှနောက် နှစ်သုံးလေးဆယ် မြဲနေရင် ဒုက္ခ’
ဆိုပြီး ပြာပြာသလဲ တားတယ်တဲ့။
ပညာရှင်တွေအခုလိုပြောတော့ ကျမဖြင့် ၀မ်းနည်းရမှာလား ၀မ်းသာရမှာလား ရုတ်တရက် ဝေခွဲမရဖြစ်ရပါတယ်။
အဲဒီစကားပြောခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော်ပဲ ထားပါတော့။ အခုဆို.. ဆယ်နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီ။ မြဲနေတုန်းပါပဲ။
ဆရာတို့ ခုလို လစ်လျူရှုလိုက်ကြတဲ့အတွက် တကယ်တမ်း ဒုက္ခရောက်တာကတော့ …ကျောင်းသားတွေပါ။
မျက်စိရှိပါလျက်နဲ့ မဖတ်တတ်တဲ့အတွက် မမြင်ဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့် အကန်းလို့ တင်စားပြီးပြောခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီစကားကြားတော့ … အဆင်းတခုကို မြင်ဖို့အတွက် အကြောင်းလေးပါး နဲ့ ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်လို့ မှတ်သားခဲ့ဖူးတာလေး သွားသတိရတယ်။
၁။ ကောင်းမွန်တဲ့ မျက်စိ (စက္ခုပသာဒ)
၃။ လုံလောက်တဲ့ အလင်းရောင်
၄။ အာရုံပြုမှု (နှလုံးသွင်းမှု)
ဒါတွေနဲ့ ပြည့်စုံမှ အဆင်းတခုကို မျက်စိက မြင်နိုင်ပါတယ်။
မျက်စိလည်းရှိ အလင်းရောင်လည်း ရှိပေမဲ့ အာရုံမပြုရင်လည်း မမြင်ပါဘူး။
ဒီလိုပါပဲ … စာသင်သားတယောက်အတွက်လည်း ပညာရပ်တခုကို တတ်မြောက်ဖို့ အကြောင်းလေးပါးပြည့်စုံမှ ဖြစ်မယ်လို့ ကျမတွေးမိတယ်။
၂။ စာသင်နိုင်အောင် လိုအပ်တဲ့ ထောက်ပံ့မှု
၄။ မှန်ကန်စွာ သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ဆရာ
ဒါတွေနဲ့ ညီညွတ်ပြည့်စုံမှ ဒီစာသင်သားဟာ ပညာရပ်တခုကို တတ်မြောက်လိမ့်မယ် လို့ ကျမ ယူဆပါတယ်။
စာသင်လိုစိတ်လည်းရှိ၊ လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုလည်း ရှိပေမဲ့ ကိုယ်သင်ကြားတဲ့ ပညာရပ်ဟာ မှန်ကန်တဲ့ပညာရပ်မဟုတ်ဘဲ ၀ါဒတခုရဲ့ မှိုင်းသွင်းခြင်း ခံရတဲ့ ပညာမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ရင် … ဒါမှမဟုတ် လူအများ ထိခိုက်နစ်နာအောင် ဆောင်ရွက်မဲ့ ပညာမျိုးဖြစ်နေရင် …. ဒါ့ပြင် ကိုယ့်ရဲ့ဆရာဟာ အမှန်နဲ့အမှားကို ကွဲပြားအောင် သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့သူ မဟုတ်ခဲ့ရင် ….
ဒီလို စာသင်သားတွေဟာလည်း စာသင်ပါလျက် တတ်ကျွမ်းသူလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။
ဒီလိုလူတွေဟာ ဘွဲ့တွေ အမြီးတွေ တသီကြီးရှိနေပေမဲ့ အလကားပါပဲ။
မျက်စိရှိလျက်နဲ့ မမြင်တဲ့ သူနဲ့ ဘာကွာအုံးမှာလဲ …။
Posted by မေဓာဝီ at 1:04 PM 1 comments
ကျမရဲ့ “ဆောင်းညအတွေး” ပို့စ်က ကဗျာလေးဟာ ကာရန်မပါဘူးဆိုပြီး Prince က “ကာရန်မပါရင် ကဗျာမဟုတ်ဘူး ကဗျွတ်” လို့ ကွန်မန့်မှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုသံလွင်ကတော့ “ကာရန်မဲ့လို့ကဗျာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရတာတော့ သေချာပါတယ်” လို့ ပြန်ရေးခဲ့တယ်။
ကဗျာလောကမှာ ကာရန်မဲ့ ကာရန်ရှိကိစ္စ အငြင်းပွါးခဲ့ကြတာ ကြာပါပြီ။
ကျမကတော့ “ကာရန်ပါတိုင်း ကဗျာမဟုတ်သလို .. ကာရန်မပါတိုင်း စကားပြေမဟုတ်ဘူး” … လို့ ယူဆလက်ခံထားပါတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီကနေ့ အဖေယူလာတဲ့ စာအုပ်ထဲက ကာရန်မဲ့ကဗျာအကြောင်းရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးထဲမှာ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်ရဲ့ ကာရန်မဲ့ကဗျာတပုဒ် ဖတ်လိုက်ရတာနဲ့ပဲ … ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ (ဟိုဆရာကြီးတွေ့ရင် ကဗျွတ်လို့ ဆိုလေအုံးမလားမသိ)
ကာရန်မဲ့ကဗျာ (မြဇင် - ကဗျာ့နရီနှင့် နိမိတ်ပုံ စာအုပ်မှ )
မင်းသုဝဏ်သည် ကာရန်စည်းကမ်းကြီးသော ကဗျာဆရာဖြစ်သည်၊ ကာရန်အသုံးပြုရာ၌ အစဉ်အလာကို မပျက်ပြားစေလို၊ အစဉ်အလာက သတ်မှတ်သော စည်းကမ်းဘောင်အတွင်း၌ ကာရန်စပ်ဟပ်လိုသည်၊ ဆရာသည် ပညာရည် ကဗျာရည်ရှိသောကြောင့် ကာရန်ကို ထိရောက်စွာအသုံးချ၍ ကဗျာ့အရည်သွေးကို မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကာရန်နှင့်ပတ်သက်သော စည်းကမ်းများကို လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် ကာရန်၏ တန်ဖိုးကို သိနားလည်သော ဆရာသည် ကာရန်မဲ့ကဗျာဘက်သို့ လှည့်စရာအကြောင်းမရှိပါ၊ သို့သော် ဆရာသည် “အင်းယားကန်သို့ အိုကုတို့” စာအုပ် စာမျက်နှာ ၁၈၉ တွင် ကာရန်မဲ့ ကဗျာတပုဒ်ကို ရေးစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။
မှက်၊ ခြင်၊ ယင်ရဲတို့မရှိ။
ဆောင်းပါးတပုဒ်လုံး ရိုက်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အတွက် သည်းခံကြပါ။
ဆောင်းပါးရဲ့ အဆုံးမှာ … ဆရာမြဇင်က ခုလိုရေးထားပါတယ်။
အတွေး၊ စကား၊ နရီအပြင် တခြား ကဗျာပစ္စည်းတွေ ရှိသေးသည်။ သို့သော် အတွေး၊ စကား၊ နရီ ဤသုံးခုမှာ အဓိကဖြစ်သောကြောင့် ဤသုံးခုပိုင်လျှင် ကာရန်မဲ့ကဗျာကောင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
ကျမ … ကဗျာမစပ်တတ်သေးပါ။
ကျမ … ကဗျာဆရာမဟုတ်ပါ။
ကာရန်ရှိ - ကာရန်မဲ့ ကိုလည်း သေချာစွာ နားလည်တတ်ကျွမ်းခြင်း မရှိသေးပါ။
ခံစားမှုကို အခြေခံပြီး ရေးဖွဲ့ခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ကဗျာမပီ စာမမည် ဖြစ်နေသော ကျမ ရေးသားမှုတွေကို သည်းခံပြီး ဆက်လက်အားပေးဖတ်ရှု ကြပါအုံးလို့ … တောင်းပန်လိုက်ပါတယ် ရှင်။
Posted by မေဓာဝီ at 1:20 PM3comments
မြန်မာဘလော့လေးတွေဆီ အလည်သွားရင်း ခရစ်စမတ်အတွက် ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သခဲ့ပါတယ်။
အားလုံးဆီတော့ မရောက်ခဲ့ဘူး .. တချို့ဘလော့တွေထဲ ၀င်လို့မရ၊ တချို့က အိမ်ပြောင်းသွား၊ တချို့ဘလော့တွေကျတော့လဲ အိပ်ပျော်နေကြတယ်။
၀င်လို့ရသလောက် လျှောက်သွားပြီး သီချင်းတွေနားထောင် … စာလေးတွေဖတ် .. အရုပ်လေးတွေကြည့် .. မုန့်လေးတွေစား .. ပျော်စရာကောင်းလိုက်ပုံများ ….
အလုပ်မလုပ်ဘဲ အမြဲ အဲဒီလို လျှောက်သွား နေရရင် သိပ်ကောင်းမယ် …
အလုပ်ဆိုတဲ့ နှောင်ကြိုးကြီး တန်းလန်း တန်းလန်းနဲ့ဆိုတော့… လျှောက်သွားရတာလဲ နောက်ဆံက တငင်ငင်နဲ့မို့ သိပ်တော့ မပျော်ရပါဘူး။
ဒါပေမဲ့လည်း ဘလော့တော်တော်များများတော့ ရောက်ဖြစ်သွားတယ် ….
ရောက်ပြီး ဆုမတောင်းခဲ့ရတဲ့ ဘလော့တွေလဲ ရှိပါတယ် …
စီဘောက်စ် ရှိတဲ့ဘလော့တွေက ရေးဖို့လွယ်ပြီး စီဘောက်စ်မပါတဲ့ ဘလော့တွေကျတော့ ကွန်မန့်ထဲ တခါဝင်ဖို့ သိပ်မလွယ်လှလို့ပါ။
အားလုံးကို ဒီနေရာကနေ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် …
မြန်မာဘလော့ဂါများ အားလုံး …ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရစ်စမတ်နေ့လေးဖြစ်ပါစေ … စည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ ချစ်ကြည် ရင်းနှီးနိုင်ကြပါစေ …
မြန်မာပြည်မှာရှိနေသော/မြန်မာပြည်နှင့် ခွဲခွါနေရသော မြန်မာပြည်သူပြည်သား အားလုံး …ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ကြ ပါစေ …
ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသား အားလုံး ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ …
ညနေ ၄ နာရီတိတိ
Posted by မေဓာဝီ at 9:05 AM9comments
တနေ၀င်လို့ တမိုးချုပ်ခဲ့ပြီ …
ဆောင်းတွင်းဆို နေမင်းလည်း ပျင်းရှာတယ်ထင်ပါရဲ့ … နောက်ကျမှထွက်ပြီး စောစောစီးစီး အိပ်တန်းတက် လို့ နေ့တာတွေလည်း တိုနေပါရောလား။
လဆန်းရက်မို့ ညကောင်းကင်ထက်မှာ … လမင်းလေးက ခပ်ကွေးကွေးရယ် … ။
နေ့ နဲ့ ည တလှည့်စီပြောင်း
နေ နဲ့ လ တလှည့်စီလာ …
တနှစ်ပြီး တော့ နောက်တနှစ်
အသစ် အသစ်တွေဖြစ်နေခဲ့တာ …
မကြာခင် ရက်ပိုင်းမှာ … သက္ကရာဇ် အသစ်တခုကိုတောင် ကူးပြောင်းတော့မှာပဲ … ။
သဘာဝတရားကြီးရဲ့ သတ်မှတ်ချက်ထဲမှာ …
နေ့ရဲ့ ညရယ် ..
အလင်းရယ် အမှောင်ရယ် ..
အပူရယ် .. အအေးရယ် … ဆိုတာရှိသလို …
လောကရဲ့ သတ်မှတ်ချက်ထဲမှာ …
အကောင်းရယ် .. အဆိုးရယ် ဆိုတာလည်း … ဒွန်တွဲလို့ရှိနေတာပါပဲ … ။
အမြဲတမ်းလည်း မကောင်းနိုင်သလို …
ထာဝရလည်း မဆိုးနိုင်ပါဘူး … ။
လပြည့်ညရှိသလို … လမိုက်ညလည်း ရှိနေတတ်တယ် … ။
နေသာတဲ့နေ့ရှိသလို ..နေမထွက်တဲ့နေ့တွေလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ် … ။
အကောင်းတွေကို လက်ခံနိုင်သလို … အဆိုးတွေကြုံလာရင်လည်း ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ သတ္တိ …
မင်္ဂလသုတ် ထဲက …
“ဖုဋ္ဌဿ လောကဓမ္မေဟိ၊ စိတ္တံယဿ နကမ္ပတိ”
ကောင်းဆိုး နှစ်တန် လောကဓံနဲ့ ကြုံကြိုက်လာတဲ့အခါ မတုန်မလှုပ်ဘဲ ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ စိတ်နဲ့ ခန္ဓာ ကိုသာ … ရလိုကြောင်း ဆုလည်း တောင်းမိပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဆုတောင်းပေမဲ့ …
ဘ၀မှာ … လိုချင်တာတွေ မျှော်လင့်တာတွေကလည်း ဖြစ်မလာတာက များပါတယ်။
ကလေးတယောက်လို … လိုချင်တာမရတဲ့အခါ … ငိုချင်လာမိပြန်ရော … ။
ဒါဟာ ပျော့ညံ့လို့ပဲလား …
သိလဲ မသိချင်တော့ပါဘူး … ။
ဒါနဲ့ပဲ … ဒီဆောင်းတညမှာ … ကဗျာအတိုအစလေး ရေးမိပြန်ပါတယ်။
ခံနိုင်ပါစေကြောင်း … ။ ။
Posted by မေဓာဝီ at 1:30 PM4comments
ဂူဂယ်စာမျက်နှာကို ဖွင့်လိုက်တော့ လိုဂိုနေရာမှာ သားပိုက်ကောင်လေးတွေ သိုးမွှေးချည်လုံးလေးနဲ့ နှစ်ချောင်းထိုးထိုးနေကြတဲ့ ပုံလေးကိုတွေ့ရလို့ ပစ်ထားတဲ့ သိုးမွေးချည်ခင်တွေ သွားသတိရမိတယ်။ ဟိုးတလောက မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖို့ ဦးထုပ်တလုံး ကြိုးစားပမ်းစား ထိုးပြီးကတည်းက နှစ်ချောင်းထိုးအပ်ရော ချည်လုံးတွေပါ မကိုင်ဖြစ်တော့ဘူး။ ခုလိုချမ်းချမ်းအေးအေးရာသီမှာ အလုပ်မရှိရင်တော့ သိုးမွှေးထိုင်ထိုးနေချင်သား။
တကယ်တော့ အဲဒီလို အလုပ်မျိုးတွေ နဂိုက ၀ါသနာမပါခဲ့ရိုးအမှန်ပါဘဲ။ ဇာထိုး ပန်းထိုး၊ တချောင်းထိုး နှစ်ချောင်းထိုး စိတ်ကို မ၀င်စားခဲ့ဘူး။ ငယ်ငယ်ထဲက အဖိုးနဲ့နေလာတာဆိုတော့ ကျောင်းပိတ်ရက်ဆို သစ်ပင်စိုက်၊ မြက်ရိတ်၊ သံတိုင်တွေကော်ပတ်စား၊ သံပန်းတွေဆေးသုတ်၊ အဲဒါမျိုးအလုပ်တွေနဲ့သာ ယဉ်ပါး ကျင်လည်နေခဲ့ရတယ်။ ကိုယ့်အင်္ကျီပြဲလို့တောင် ကိုယ်မချုပ်တတ်ခဲ့ဘူး။ ကျောင်းကအိမ်တွင်းမှု အချိန်ဆို ဘယ်ထွက်ပြေးရမှန်းမသိအောင် စိတ်ညစ်ခဲ့ဖူးပါရဲ့။
အဲဒီလို မိန်းမပီပီသသမို့ ဆယ်တန်းအောင်တော့ အမေက အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းကျောင်း ပို့ပါတယ်။ ဓမ္မစေတီ လမ်းပေါ်က ကျောင်းပေါ့။ သင်ယူရတဲ့ဘာသာက အထွေထွေအပ်ချုပ်တဲ့။ အစားအသောက်ဆို ဟုတ်တုတ်တုတ်။ ဒါနဲ့ပဲ အဲဒီကျောင်းတက်နေစဉ် ၃ လ တိတိ အပ်တွေ ချည်တွေနဲ့ နပန်းလုံးခဲ့ရတယ်။ ခေါင်းအုံးစွပ် ပန်းထိုးပြီး တင်ရမယ့်နေ့က မပြီးလို့ အိမ်မှာ ဂျီတိုက်နေတာနဲ့ အမလတ်က ကူထိုးပေးပါတယ်။ အရပ်ကူပါ လူဝိုင်းပါနဲ့ သင်တန်းလည်း ပြီးဆုံးတော့ သွားခဲ့တာပါပဲ။ သိပ်တော့လည်း တတ်လှတယ် မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့လည်း တတ်သည့်ပညာ မနေသာဆိုသလို သင်ထားတဲ့ပညာလေးကို အသုံးချချင်တာနဲ့ အမေနဲ့အဖေအတွက် ဦးဆုံး တခုခုလုပ်ပေးဖို့ စဉ်းစားတော့ … နှစ်ချောင်းထိုး နဲ့ တခုခုထိုးပေးမယ်လို့ စိတ်ကူးရပါတယ်။ သိုးမွှေးထိုးရာမှာ တချောင်းထိုးနဲ့ နှစ်ချောင်းထိုးဆိုရင် ကျမက နှစ်ချောင်းထိုး ထိုးရတာ ပိုကြိုက်တယ်။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ငယ်ငယ်က အဖေ၀ယ်ပေးတဲ့ ကာတွန်းပုံလေးတွေပါတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ထဲမှာ ကြောင်အဖွားကြီးက မျက်မှန်သေးသေးလေးတပ်ပြီး ခုံကြီးပေါ်မှာထိုင်လို့ နှစ်ချောင်းထိုး ထိုးနေတဲ့ပုံလေး ကို သဘောကျခဲ့ဖူးတယ်။ တချောင်းထိုးနဲ့ ထိုးထားတဲ့ အင်္ကျီထက်စာရင် နှစ်ချောင်းထိုး အင်္ကျီတွေကိုလည်း ပိုသဘောကျလို့ပါ။
ဒါနဲ့ပဲ စစချင်း အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ မာဖလာထိုးခဲ့တယ်။
အမေနဲ့ အဖေကို ခရစ်စမတ်နေ့ အမီ လက်ဆောင်ပေးဖို့ ၂ ခု ပြီးအောင် ထိုးမယ် ဆိုပြီးရည်ရွယ်ထားပေမဲ့ ၁ ခုပဲ ပြီးပါတယ်။ မတတ်နိုင်ဘူး .. အဲဒီတခုကိုပဲ ပက်ကင်လှလှလေးထုတ်ပြီး အမေနဲ့ အဖေကို မဲနှိုက်ခိုင်းတယ်။ လူကြီးတွေလဲ အငြိမ်မနေရဘူး။ မဲနှိုက်တော့ အမေကပေါက်ပါတယ်။ အဖေကတော့ ‘အဖေက အဲဒီလို မဲပေါက်တတ်တဲ့ ကံ မရှိဘူး’ လို့ သူ့ကိုယ်သူပြောပါတယ်။ အမေက သူမဲပေါက်ပေမယ့် မယူဘဲ အဖေ့ကိုပဲ ပေးလိုက်တယ်။ ချစ်ပုံများ … လေ။ အဲဒီ မီးခိုးရောင် မာဖလာလေး အဖေခုထိ ပတ်နေတုန်းပါပဲ။
နောက်တော့ အမေ့အတွက် ခေါင်းစွပ် ဦးထုပ်တလုံးထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ မာဖလာတွေ ဦးထုပ်တွေ ထိုးရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း စိတ်ပါလာပြီး အင်္ကျီထိုးနည်းတွေကို ကြီးတော်ကြီးဆီမှာ ဆက်လက်သင်ယူပါတယ်။ သင်နေရင်းနဲ့ သင်ထိုးလေးတွေ ထိုးခဲ့တာကတော့ အဖေ့အတွက် ခေါင်းစွပ် ဆွယ်တာလက်ပြတ်တထည် နဲ့ အမေ့အတွက် လက်ရှည်တထည် ပါ။ အဲဒါတွေပြီးဖို့ကတော့ အချိန် သိပ်မပေးရပါဘူး။ ဆောင်း ၃ ဆောင်းလောက်ပါပဲ။ တဆောင်းသစ်ပြီဆိုရင် ထိုးလက်စ ချည်ခင်တွေသိုးမွှေးတွေပြန်ကိုင်၊ နွေပေါက်ရင် ချထားလိုက်နဲ့ ဆိုတော့လည်း ဒီလောက်တော့ကြာမှာပေါ့။
အဖေ၊ အမေ နဲ့ တခြားသူတွေအတွက် ထိုးပေးဖြစ်ပေမဲ့ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်တော့ ဘာတခုမှ မထိုးဖြစ်ပါဘူး။ ဆွယ်တာ အနေနဲ့ နောက်ဆုံးထိုးဖြစ်တာက အဖွား (အဖေ့အမေ) အတွက်ပါ။ ယုန်မွှေးချည်နဲ့ အဖွားအတွက် ဆွယ်တာထိုးနေတာ ထုံးစံအတိုင်း ကြာနေတော့ အဖွားက ငါသေတောင် ၀တ်ရပါ့မလား လို့ နိမိတ်ဖတ်သလို ပြောလိုက်တာ။ တကယ်ပဲ သူသာသေသွားရော ဆွယ်တာက မပြီးလိုက်ဘူး။ သေပြီးတော့မှ ကြီးတော်ကြီးက အဆုံးသတ်ထိုးပေးပါတယ်။
တခါတလေကျတော့လည်း ၀ါသနာမပါပေမဲ့ လုပ်မိနေတဲ့ အလုပ်တွေက အများသားပဲ။ ဒီနှစ်ချောင်းထိုးဆို စ သင်ခါစက အပ်မကိုင်တတ် ချည်မကိုင်တတ်နဲ့ ထိုးရင်းနဲ့ လက်တွေကိုက်လို့ ငိုတောင် ငိုခဲ့ရတာ။ အမေ တိုက်တွန်းလို့ ဒီသင်တန်းလေး တက်ခဲ့ရတယ်၊ အပ်ဘယ်လို ကိုင်ရတယ် ဘယ်လိုထိုးရတယ်ဆိုတာလေးတွေ နားလည်ခဲ့တယ်။ ၀ါသနာမပါပေမဲ့ ပညာရပ်တခုဆိုတာ တတ်ထားရင် အကျိုးတော့ရှိသားပါပဲ။ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့အခါ အသုံးချနိုင်တာပေါ့။ တယောက်ယောက်ကို လက်ဆောင်ပေးချင်တဲ့အခါ ကိုယ့်လက်နဲ့ ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးပေးရတော့ ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ စိတ်ထဲ ထင်မိတယ်။
ဒီတဆောင်းမှာတော့ ကျမရဲ့ လက်ဟာလည်း ချည်ခင်လေးတွေ အပ်လေးတွေနဲ့ ဝေးပြီး ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ တချောက်ချောက်ပြေးလွှားလိုက် မီးဖိုထဲမှာ ဓားတွေကိုင်လိုက် ကြက်သွန် အာလူးတို့ သားငါးတို့ ကိုင်လိုက်နဲ့ … ၀ါသနာပါတာတလှည့် မပါတာ တလှည့် လုပ်နေရပါပေါ့လား။
Posted by မေဓာဝီ at 9:15 AM4comments
Posted by မေဓာဝီ at 5:31 AM5comments
Posted by မေဓာဝီ at 1:27 PM 1 comments
အဖေက စစ်တုရင်ကို တော်တော်လေး ရူးသွပ်စွာ စွဲလမ်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ စစ်တုရင်ကစားနည်းကို သိတဲ့ အချိန်ကစပြီး ဒီကစားနည်းဟာ မျှတတယ်၊ မှန်ကန်တယ်၊ လေးနက်တယ် ဆိုပြီး တစိုက်မတ်မတ် လေ့လာ လိုက်စားခဲ့တယ်။
စစ်တုရင်ကို ဘယ်လောက်တောင် စွဲလမ်းသလဲ ဆိုရင် နေမကောင်းဖြစ်လို့ အိပ်ရာထဲ လဲနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရောဂါကို ရထားနဲ့ကာလိုက် မြင်းနဲ့တိုက်လိုက် ဘုန်းကြီးနဲ့ ထောက်လိုက် … လုပ်နေမိတဲ့အထိပဲ .. တဲ့။
‘နောက်ဆုံးတော့ ဘုရင်မကြီးကပဲ လာကယ်သွားရတာ မဟုတ်လား အဖေ’ ဆိုတော့ အဖေက ပြုံးပြုံးကြီး လုပ်နေပါတယ်။
အဖေ စစ်တုရင်ကို ဘာလို့ကြိုက်တာလဲ လို့ ကျမမေးတဲ့အခါ …
‘chess မှာက ပညာရပ်ပေါင်းစုံအောင်ပါတယ်၊ ဆိုက်ကို၊ သင်္ချာ၊ စီးပွားရေး၊ စစ် ပရိယာယ် နည်းဗျူဟာတွေ … စသဖြင့်ပေါ့ … အများကြီးပါတယ် …ပြီးတော့ သူက ကျက်ကွက် မရှိဘူး။ အလွတ်ကျက်လို့မရဘူး …’
‘သူက မျှတတယ်ဆိုပေမဲ့ … တဖက်နဲ့ တဖက်မှာဆိုရင်တော့ မျှတရင် မျှတမှာပေါ့ … ဒါပေမဲ့ တဖက်ထဲ အနေနဲ့ ကြည့်ရင် … ဘုရင်ကြီးမသေဖို့ ကျန်တဲ့ အကောင်လေးတွေက ၀ိုင်းကာကွယ်နေရတာ …. နော် …ပြီးတော့ အားနည်းတဲ့ ပွန်းကလေးတွေကို အရင်ထိုးကျွေးရတာ … ဆိုတော့ အဲဒါကို မျှတတယ်ခေါ်မလား …’
ကျမက အတွန့်တက်တော့ အဖေက ပြုံးပြီး
‘တဖက်နဲ့ တဖက် စစ်တိုက်နေရတာလေ … စစ်ပွဲမှာ အဓိကလူကို အကာအကွယ်ပေးရမှာ ထုံးစံပဲမဟုတ်လား … ဘုရင်ကြီး မရှိရင် ရှုံးပြီဆိုတော့ ဘုရင်ကြီးကိုပဲ အားလုံးက ကာကွယ်ရမှာပေါ့ … အဲဒီတော့လည်း အားနည်းတဲ့ ကောင်တွေ စတေးသင့်ရင် စတေးရမှာပဲ မို့လား’
‘အင်း … ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ် … ဒါပေမဲ့ အဓိက သာဆိုတယ် … ဘုရင်ကြီးက တော်တော်ညံ့တာပဲ … သူ့မှာ လှုပ်ရှားကွက် သိပ်မရှိဘူးနော် … အားလုံးက သူ့ပဲ ၀ိုင်းကာကွယ်နေရတာ … သူက ပြန်ခုခံနိုင်တယ်ဆိုတာမှ မရှိဘဲ … သမီးကတော့ မြင်းကိုကြိုက်တယ် … တခါတလေ ကိုယ့်မြင်းကွက်ကို တဖက်လူက အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်ရင် ကိုယ်စားမှာပဲ …’
တခါတော့ … အဖေ့ စစ်တုရင် ဆရာလည်းဖြစ် မိတ်ဆွေလည်း ဖြစ်တဲ့ ဦးလေးကြီးက ‘လှံ နဲ့ ဒိုင်း’ အမည်နဲ့ စစ်တုရင်စာပေ လုပ်မယ်ဆိုပြီး အဖေ့ကို ကဗျာလေးရေးခိုင်းပါတယ် … တဲ့။
စစ်တုရင်မှာ အဓိက က attack & defence ပဲ မဟုတ်လား။ လှံ ဆိုတာဟာ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုပြီး၊ ဒိုင်း ကတော့ ကာကွယ် ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ စာပေလေးကို လှံ နဲ့ ဒိုင်း လို့ အမည်ပေးခဲ့တာပါ။
ဒါနဲ့ပဲ အဖေက လှံ နဲ့ ဒိုင်း အမည်နဲ့ ကဗျာလေးတပုဒ်ရေးပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီကဗျာလေးကိုလည်း အဖေ တော်တော်နှစ်သက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်တွေကြာသွားပြီး ကဗျာမူရင်းလည်း ပျောက်ပျက်သွားတော့ ဒီကဗျာလေးကို အဖေ အစအဆုံး မမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့။
ကျမက မှတ်မိသလောက် ရွတ်ပြပါဆိုတာနဲ့ အဖေက စဉ်းစားပြီး ရွတ်ပြတယ် …
ပြက်ပြက်ထင်ထင်၊ ဆန်းစစ်လျှင် ….
အဲဒါပဲ အဖေက မှတ်မိတော့တယ် … ဒါပေမဲ့ နောက်ပါဒတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပြောပြပါတယ်။
“ကျောက်ခေတ်မှာ ကျောက်လက်နက် ..နောက် .. သံခေတ်ကျတော့ .. ဓား၊ လှံ စတဲ့ သံလက်နက် .. ဒီကနေမှ တဖြည်းဖြည်း သေနတ်၊ အမြောက် .. နောက်ဆုံး နျူကလီးယားလက်နက်ထိ အဆင့်ဆင့် လက်နက်တွေ ပြောင်းလဲ တိုးတက်သွားတာကို ရေးတယ် … ။ ဘယ်လိုပဲ လက်နက်တွေတိုးတက် တိုးတက် … တကယ်တမ်း ဆန်းစစ်ကြည့်ရင် စစ်ပွဲတခုရဲ့ အဖြေဟာ … ဘာလဲ … သူသေဖို့ နဲ့ ကိုယ်နေဖို့ … ဒါပဲ မဟုတ်လား …
ဒါကြောင့် နောက်ဆုံးစာပိုဒ်မှာ …
ဤအဖြေတည်း ။ ။ ဆိုပြီး အဆုံးသတ်ထားတယ် … လှံ ဆိုတာ သူ သေဖို့ (တိုက်ခိုက်ဖို့)ပေါ့။ ဒိုင်းကတော့ ကိုယ်နေဖို့ (ကာကွယ်ဖို့) ဆိုပြီး အဲဒီကဗျာကို အဖေရေးခဲ့တာ။ အစအဆုံးတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး”
အဖေဟာ စစ်တုရင်ကို ကျောခိုင်းခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓရဲ့ အဘိဓမ္မာ တရားတော်နဲ့ တွေ့သွားပြီးတဲ့နောက် … တကယ့် လေးနက် မှန်ကန်ခြင်းဟာ ဘာလဲလို့ သိသွားလို့ပါပဲ။
စစ်တုရင် နဲ့ အဘိဓမ္မာ ကို ချိန်ထိုးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် အပူ နဲ့ အအေး လိုပဲ လုံးဝ ကွဲပြားနေတာကို အဖေ မြင်သွားခဲ့တယ်။
‘စစ်တုရင်ဟာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ခြံရံပြီး ကစားရတယ်။ အဘိဓမ္မာကတော့ ဒါတွေကို သိအောင် မြင်အောင် ကြည့်တတ်ဖို့ နည်းလမ်းပေးတဲ့ ပညာရပ်ပဲ။ ဒါကြောင့် အနှစ်သာရခြင်း ကွာခြားတယ်’ လို့ အဖေက ပြောပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အဖေဟာ သူ့မိတ်ဆွေတွေ တားတဲ့ကြားက စစ်တုရင်လောကကိုကျောခိုင်း စွန့်ခွါပြီး အဘိဓမ္မာကို သာ တစိုက်မတ်မတ် လေ့လာလိုက်စားခဲ့ပါတယ်။
ခုတော့ … တိုက်ခိုက်ခြင်း နဲ့ ကာကွယ်ခြင်းကို အဖေက တမျိုး အသုံးချနိုင်သွားပါပြီ။
၆၄ ကွက်သော ဘုတ်ပြားလေးပေါ်မှာ အဖြူနဲ့ အမည်း ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက် နေတာမဟုတ်တော့ဘဲ ကိလေသာ ရန်သူတွေကို တိုက်ခိုက်ပြီး အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ် နေပါတော့သတဲ့။
Posted by မေဓာဝီ at 6:37 AM 1 comments
Posted by မေဓာဝီ at 12:37 PM5comments
မနေ့က ညနေခင်း လဖက်ရည်ဆိုင်မှာ သူငယ်ချင်းနဲ့အတူထိုင်နေတုန်း ကလေးလေးတယောက် အနားရောက်လာပြီး မပီကလာ ပီကလာနဲ့ ပြောလာပါတယ်။
ရုတ်တရက် သူပြောတာ နားမလည်လိုက်ဘူး။ သူက နှပ်တချက်ရှူးခနဲ ရှုံ့သွင်းလိုက်ရင်း ထပ်ပြောတယ်။
အဲဒီတော့မှ သူ့ခေါင်းပေါ်ရွက်လာတဲ့ တောင်းကလေးထဲ သတိထားကြည့်မိတော့ စပါးတွဲလေးတွေကို တွေ့ရတယ်။ စပါးတွဲလိုက်ရောင်းနေတဲ့ ကလေးလေး တယောက်ပါ။
ကလေးလေးက အတော်ငယ်ပါသေးတယ်။ တကယ့်ကို သေးသေးပိစိလေး။ သူ့ မျက်နှာက ကြောင်ချေးရုပ်ပေါက်နေပြီး နှပ်ချေးကတရှုံ့ရှုံ့ … ကြယ်သီးတလုံးမှ မပါတဲ့ အင်္ကျီရင်ဘတ်က ဟပြဲ ။ ဘောင်းဘီက တဖက်တို တဖက်ရှည်၊ ဖိနပ်မပါ ခြေဗလာသက်သက်။
ဒါနဲ့ ကျမက ကြုံတုန်း သူ့ကို အင်တာဗျူးလိုက်ပါတယ်။
‘သားက ဘယ်ကနေပြီး လာရောင်းတာလဲ’
သူပြောတာ နားမလည်လို့ သုံးလေးခါ ထပ်မေးရပါတယ်။ နောက်မှ ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားဈေးက ဆိုတာ သဘောပေါက်တယ်။
‘အဖေ အမေ မပါဘူးလား … သား တယောက်ထဲလား’
‘ဟင့်အင်း …. မပါဘူး … တယောက်ထဲ’
ပြောသာပြောတာ သူက တချက်တချက် ဟိုဘက်နား လှမ်းကြည့်နေလို့ တယောက်ယောက်တော့ ပါမယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်။
တယောက်ထဲ ကားဘယ်လိုစီးလဲ … ဘယ်နားမှာကားစီးရလဲ … စသဖြင့် ကျမမေးသမျှတွေ သူဖြေပေးပါတယ်။ သူဖြေသမျှတော့ ကျမအကုန်နားမလည်ပါဘူး။
‘စပါးတတွဲ ဘယ်လောက်လဲ သား…’
သူပြောတာ ငါးကျပ်နဲ့ ငါးဆယ် မသဲကွဲပါဘူး။ ဒါနဲ့ ကျမက ငါးကျပ်လား လို့ ထပ်မေးတော့ ဟင့်အင်း နားဂျယ် လို့ ပြောတယ်။ ကျမ ၅၀ တန်တရွက်ထုတ်ပြီး သူ့ကိုပေးရင်း
လက်ကလေး ၃ချောင်းထောင်ပြီးပြောတော့ ကျမရင်ထဲ နင့်ခနဲဖြစ်သွားမိပါတယ်။
အသက် သုံးနှစ်သာရှိသေးတဲ့ ကလေးလေးတယောက်ဟာ ခုလို ဈေးရောင်းနေရတာ …ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ … လို့ ကျမ တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ အသက်သုံးနှစ်အရွယ် ဆိုတာ မိခင်ရင်ခွင်ထဲမှာ ပျော်လို့ကောင်း ဆော့လို့ ကောင်းတဲ့ အပူအပင်ကင်းမဲ့တဲ့ အရွယ်လေးပါ။
ကျမ သူ့ကိုကြည့်ပြီး ငိုင်တွေနေတုန်းမှာပဲ ကလေးလေးက တခြားဝိုင်းတွေဘက် ဆက်ထွက်သွားပြီး သူ့စပါးတွဲလေးတွေ လိုက်ရောင်းနေပါတယ်။
သူသွားရောင်းတဲ့ ၀ိုင်းတွေမှာ သူ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီး နှာခေါင်းရှုံ့ကြ မောင်းထုတ်ကြနဲ့ပါ။ လဖက်ရည်ဆိုင်မှာ လာသောက်နေတဲ့ ဘယ်လိုလူကများ သူ့ရဲ့ စပါးတွဲတွေ ၀ယ်သွားကြမှာလဲ။ ကျမလဲ သူ့ကို ၅၀ပေးလိုက်ပေမဲ့ စပါးတွဲတော့ မယူလိုက်ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ဟိုဝိုင်း ဒီဝိုင်း မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ‘ဂျဘားတွဲဝယ်ပါ’ လို့ လိုက်ရောင်းနေတဲ့ သူ့ကို လဖက်ရည်ဆိုင်အပြင်က စာကလေးသည် မိန်းမကြီး လှမ်းခေါ်လိုက်လို့ ကျမ နည်းနည်းဝမ်းသာသွားမိတယ်။ စာကလေးနဲ့ စပါးတွဲက အံကိုက်ပဲဆိုတော့ .. ဒီမိန်းမကြီး စပါးတွဲဝယ်ရင် ကလေးလေးလဲ ဈေးရောင်းရပြီပေါ့။
သူတို့နေရာက ကျမတို့စားပွဲနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာမို့ ကျမလဲ အကဲခတ်ကြည့်နေမိပါတယ်။ စာကလေးသည် မိန်းမကြီးနဲ့ ကလေးလေး အပြန်အလှန် ဈေးစကားပြောကြပြီး မိန်းမကြီးက တောင်းထဲက စပါးတွဲတွေ တခုပြီးတခု ရေတွက်ရင်း ယူပါတယ်။
၁၅ တွဲကို ၅၀၀ နဲ့ ဆစ်တာလား တွဲ ၂၀ ကို ၅၀၀ နဲ့ ဆစ်တာလား ကျမ သေချာမကြားရပါဘူး။ သေချာတာကတော့ ဒီမိန်းမကြီး ဈေးဆစ်နေတာပါ။
‘ဘယ်လိုမိန်းမကြီးလဲမသိဘူး၊ စေတနာရှိရင် ပိုက်ဆံအလကားပေးလိုက်ပါလား၊ စေတနာရှိသယောင်ယောင်နဲ့ ၀ယ်မလိုလိုလုပ်ပြီးတော့ ကလေးကို မတရားဈေးဆစ်နေတယ်… အသက်ကဖြင့် ….’
ကျမသူငယ်ချင်းက ဒေါကန်ပြီး ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ပြောနေပါတယ်။ ကျမတို့ကြည့်နေတုန်းပဲ မိန်းမကြီးက ကလေးရဲ့ တောင်းလေးထဲ စပါးတွဲတွေ ပြန်ပြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်။ မယူတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေ့ါ။ ဘေးကကြည့်တဲ့ ကျမတို့ကသာ ဒေါမနဿတွေပွားနေမိတာ … ကလေးလေးကတော့ အေးအေး ဆေးဆေးပါပဲ။ သူ့တောင်းကလေးရွက်ပြီး ဟိုဝိုင်း ဒီဝိုင်း လျှောက်သွားနေပြန်ရော။
ကျမတို့ အကဲခတ်နေတာကို သတိထားမိတဲ့ စာကလေးသည် မိန်းမကြီးက ကျမတို့ဆီထလာပြီး …
‘အဲဒီလိုပဲ ကလေးတွေကို ဈေးရောင်းခိုင်းနေတာလေ … သူတယောက်ထဲ မဟုတ်ဖူး .. သူ့အမပါသေးတယ်’
‘သြော် … ဟုတ်လား …’
‘ကလေးသာဆိုတယ် … လူလည်လေး …ဈေးဆစ်တာကို သူ့အဖေရိုက်လိမ့်မယ်တဲ့ … လုံးဝမလျှော့ဘူး’
ဒီမိန်းမကြီးကို အမြင်နဲနဲကတ်နေတာမို့ သူ့ကို အလိုက်အထိုက် တခွန်းလောက်ပဲပြန်ပြောပြီး ကလေးလေးကို ပဲ လိုက်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ ကလေးလေးက သူ့ကို ဘယ်ဝိုင်းကမှ လက်မခံတော့ တောင်းကလေးကို ယိုင်ထိုးထိုး ရွက်ရင်း ကျမတို့နား ယောင်ပေပေနဲ့ ပြန်ရောက်လာပြန်တယ်။
ဒီတခါတော့ ကျမသူငယ်ချင်းက လှမ်းခေါ်ပြီး မေးပါတယ်။
‘မင်း ဒီစပါးတွဲတွေကုန်မှ အိမ်ပြန်ရမှာလား’
‘မင်းအိမ်မှာ အဖေ အမေမရှိဘူးလား
‘အမေက မုန့်ကြာဂျိ သာဂူရောင်းတယ်’
‘မင်း ဘယ်သူနဲ့လာလဲ … အမ ပါတယ်ဆို’
ဆိုတော့ သူဝန်ခံပါတယ်။ အမဆိုတာကလည်း အသက် ၆ နှစ်ပဲရှိသေးတာပါ။ မောင်နှမ နှစ်ယောက် တူတူ စပါးတွဲရောင်းပြီး ၀မ်းစာရှာနေကြရတာပေါ့။ သူ့နာမည်ကိုမေးတော့ “မင်းသိန်းထိုက်” တဲ့။
ကျမသူငယ်ချင်းက စားပွဲထိုးကိုခေါ်ပြီး ဘဲသားမုန့်တပွဲမှာလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူစားဖို့ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်လေးနဲ့ ထည့်ပေးလိုက်တယ်။
‘မင်းထမင်းမစားရသေးဘူးမို့လား ..ရော့ အဲဒါစား … မင်းအမကိုလဲ ကျွေး …ပြီးရင် အိမ်ပြန်တော့’
ကျမလဲ သူ့ကို နောက်ထပ် ပိုက်ဆံထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကလေးလေးက ပေစောင်းပေစောင်းနဲ့ ကျမတို့ဝိုင်းက ထွက်သွားတယ်။ ခဏနေတော့ သူ့အမ လိုက်လာပြီး နှစ်ယောက်သား တ၀ိုင်း ပြီး တ၀ိုင်း ဈေးလိုက်ရောင်းနေကြပါတယ်။
ဒီလဖက်ရည်ဆိုင်က ကျမ တခါရေးဖူးသလိုပဲ အလှူခံရော သူတောင်းစားရော တော်တော်များပါတယ်။ သူတို့က လဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အလုပ်ဆင်းသလို နေ့စဉ် လာကြတယ်။ မနက်ဆို ရောက်လာပါပြီ၊ ယောဂီညိုရောင်တွေ ဆင်မြန်းကာ တောင်းရမ်းကြပြီး နေ့ခင်းဆို အရိပ်ကောင်းတဲ့တနေရာ ဒါမှမဟုတ်လဲ ဆိုင်က ခုံတခုခုမှာထိုင်ပြီး ပိုက်ဆံတွေရေတွက်၊ ညနေဆို အိမ်ပြန်။ သူတို့အတွက်တော့ ဟန်ကျနေတာပါပဲ။
သူတို့လို သန်စွမ်းကျန်းမာတဲ့ လူကြီးတွေ တောင်းရမ်းစားသောက်နေတာထက်စာရင် ဒီကလေးလေးတွေ ခုလို ဈေးရောင်းတာက တော်ပါသေးတယ်လို့ စိတ်ထဲ ဖြေတွေး တွေးမိတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြေတွေးလည်း အသက် သုံးနှစ်အရွယ် ကလေးငယ်ရဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘ၀ကိုဖြင့် ကျမတော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
ဒီကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်က ဘာလဲ …. ။
ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ … ကလေးတွေရဲ့ လက်ထဲမှာလို့ ဆိုကြတယ်။
ဘယ်လို ကလေးတွေရဲ့ လက်ထဲမှာလဲ …
တောထဲတောင်ထဲ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ပြေးလွှားနေကြရတဲ့ ကလေးတွေလား …
မြို့ပြမှာနေပြီး ခုလို ဈေးရောင်းသူရောင်း .. တောင်းစားသူစား ..ဖြစ်နေကြတဲ့ ကလေးတွေလား …
ဒါမှ မဟုတ် …
မှန်အလုံပိတ်ထားတဲ့ အကောင်းစားကားကြီးပေါ်က မြေမနင်းသားလေးတွေလား …
သူတို့လေးတွေရဲ့ ကံကြမ္မာ …
တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို … ကြိုတင်သိချင်စမ်းပါဘိတော့တယ်။
Posted by မေဓာဝီ at 4:20 AM 12 comments
တနေ့တနေ့ ကျမ အလုပ်တွေများနေတဲ့ကြားက အချိန်ရရင် ရသလို ကိုယ့်ဘလော့အတွက် ကိုယ် စာရေးတဲ့အခါရေး … တခြားဘလော့တွေသွားဖတ်တဲ့အခါ ဖတ် … တခါတလေတော့လည်း ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဘလော့တွေမှာ ကိုယ့်ထင်မြင်ချက် commentလေးတွေ ချထားခဲ့တတ်ပါတယ်။
ကျမ အမြဲဝင်ဖတ်လေ့ရှိတဲ့ ဘလော့တွေထဲမှာ ကိုသံလွင်ရဲ့ ဘလော့သည်လည်း တခုအပါအ၀င်ပါ။ သူ့ဘလော့ဖတ်ပြီးရင်လည်း အဲဒီလိုပဲ ကွန်မန့်လေးတွေ ရေးခဲ့မိပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ ကိုသံလွင်ဘလော့မှာ ဘာပို့စ်များ အသစ်တက်သလဲလို့ ၀င်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ … သူ့ရဲ့ စီဘောက်စ် မှာ “ပြည်ချစ်စစ်သား” ဆိုသူက ခုလို ရေးထားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
“ပြည်ချစ်စစ်သား :ရေးတဲ့လူကိုရော.. ပုံမှန် ကွန်မန့်ရေးနေတဲ့ လူတွေကိုပါ အံ့သြမိပါရဲ့.. အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တိုင်း အကောင်းထင်နေကြသကိုး။ အဆင့်အတန်းမဲ့ကြပါပေတယ်”
အဲဒီစာကိုတွေ့ပြီး ကျမ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့အပြင် ခေါင်းထဲကိုလည်း အတွေးတွေ တသီတတန်းကြီး ရောက်လာလို့ ဒီစာကိုရေးလိုက်မိတာပါ။
သူရေးတဲ့စကားလုံးတွေကို ကျမ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သုံးသပ်ကြည့်မိတဲ့အခါ …
“အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တိုင်း အကောင်းထင်နေကြတယ်” … တဲ့။
ကျမတို့ ဘလော့မှာ စာတွေရေးတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံ၊ ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘ၀ခရီး အပြင် … ကိုယ့်အယူအဆ၊ ကိုယ့်ထင်မြင်ချက် .. စတာတွေကို ရိုးသားစွာ တင်ပြခြင်း သက်သက်ပါပဲ။ အရှိကို အရှိအတိုင်း အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းပြောတာဟာ “အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တယ်” လို့ ခေါ်ပါသလား။
ကျမတို့ ဘာကိုအကောင်းထင်ကြတာလဲ …။ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တာကို ကျမတို့ အကောင်းထင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်အတိုင်းမြင်တာကို အကောင်းထင်တာပါ။ မြင်တဲ့အတိုင်းပြောနေတာကို ထောက်ခံနေကြတာပါ။ ဘယ်အစိုးရပဲ ရှိရှိ ကျမတို့ မြင်တဲ့အတိုင်း .. ကျမတို့ ခံစားရတဲ့အတိုင်း ပြောနေကြမှာပါပဲ။ ဒါဟာ အံ့သြစရာ ကောင်းနေပါသလား။
“အဆင့်အတန်းမဲ့တယ်” … တဲ့။
သူဟာ အဆင့်အတန်းကို ဘာစံနဲ့တိုင်းတာ သတ်မှတ်သလဲ ကျမစဉ်းစားလို့မရပါဘူး။ ကျမ သိတဲ့ အဆင့်အတန်းကတော့ ရုပ်ဝတ္ထုမဟုတ်ပါဘူး၊ အတ္တ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလို ပြောလာသူရဲ့ အဆင့်အတန်းကိုလဲ ကျမဖြင့် သိချင်လှပါဘိ။
နောက် “ပြည်ချစ်စစ်သား” ဆိုတဲ့ သူ့နာမည်ပါ။
တိုင်းပြည်ကိုချစ်သော စစ်သား … လို့ ကျမ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
သူဟာ တိုင်းပြည်ကို တော်တော်ချစ်လို့ ဒီအမည်ပေးထားတာလို့ ကျမယူဆပါတယ်။ စစ်သားဆိုတော့ တပ်မတော်သား တယောက်ပေါ့။ ဗိုလ်ချုပ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်က တပ်မတော်သားတယောက် ဖြစ်မှာပါပဲ။ ဗိုလ်ချုပ် တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ဟာ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်ကို ဘေးရန် အန္တရာယ် အပေါင်းက ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ဖို့ မဟုတ်လား။
သူ တိုင်းပြည်ကို ချစ်တယ် ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့လူကြီးတွေဟာလဲ တိုင်းပြည်ကို တော်တော်ချစ်ကြမှာပါပဲ။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ကျမတို့ တိုင်းပြည်မှာကလဲ သူတို့ ချစ်လောက်တဲ့ သယံဇာတတွေဟာ မြေပေါ် မြေအောက် ပေါကြွယ်ဝ နေပေသကိုး။ ဒါကြောင့် သူတို့ တိုင်းပြည်ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ မပြောလဲပဲ သိပါတယ်… ယုံလည်း ယုံကြည်ပါတယ်။
ချစ်တယ်ဆိုရင် ရယူပိုင်ဆိုင်လိုကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဓမ္မတာပါပဲ။ ကျမတို့ ငယ်ငယ်ထဲက ကိုယ်ချစ်တဲ့ အရုပ်လေးဆို လိုချင်တယ်။ သိမ်းထားချင်တယ်။ သူများကို မပေးချင်ဘူး။ သူများလက်ထဲ ရောက်သွားမှာ မလိုလားဘူး။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ … ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး ချစ်ကြရင်လဲ ရယူပိုင်ဆိုင်လိုကြတာပဲ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့သူတွေဟာ တိုင်းပြည်ကို ရယူပိုင်ဆိုင်လိုမှာပေါ့။ ဒါဟာ မဆန်းပါဘူး။
“အချစ်နဲ့စစ်မှာ မတရားတာ မရှိဘူး” ဆိုတဲ့ စကားကို ဘယ်ပညာရှိသုခမိန်က ထွင်သွားခဲ့လဲ မသိပါဘူး။
ကျမဖြင့် ဒီစကားကို နည်းနည်းမှ သဘောမကျပါဘူး။ ဒါဟာ ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေရဲ့ ဆင်ခြေကန်စကားလို့ ပဲ မြင်ပါတယ်။ တကယ်ချစ်တာပါဆိုပြီး သူများမိန်းမ ကြာခိုတဲ့သူကို တရားတယ်လို့ဆိုမလား။ စစ်တိုက်တာပဲ … ဆိုပြီး အပြစ်မဲ့သူတွေကို ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်တာကရော .. တရားပါသလား။
တကယ်တော့ တိုင်းပြည်ကို ချစ်တာထက် ပြည်သူလူထုကို သနားရမှာပါ။
ဒီလောက် သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝတဲ့ တိုင်းပြည်မှာနေထိုင်နေကြတဲ့ ၅၅ သန်းကျော်သော ပြည်သူလူထု ဘာဖြစ်နေလဲ ….။ လူထုရဲ့ လိုလားတောင့်တချက်က ဘာလဲ။
ပြည်ချစ်စစ်သားကြီး ခေါင်းအေးအေးထား စဉ်းစားမိရဲ့လား မသိ။
ဒီစာကိုရေးနေရင်းနဲ့ မဟောသဓာရဲ့ “သားတရားစီရင်ခန်း”ကို သွားသတိရမိပါတယ်။ ကလေးရဲ့ အသွေးအသားကို စားလိုတဲ့ ဘီလူးမဟာ ကလေးငိုနေတဲ့ကြားက နာရင်နာပါစေ သူပိုင်ဆိုင်ရရင်ပြီးရော ဆိုပြီး အတင်းလုတော့ ကလေးကို သနားတဲ့ မိခင်ရင်းက ရင်နာစွာနဲ့ အလျှော့ပေးလိုက်ရပါတယ်။
ကျမတို့တိုင်းပြည်ဟာ နာ နေပါပြီ။ လူထုဟာလည်း ငိုနေကြပါပြီ။ ဘီလူးလက်က လွတ်အောင် ဘယ်လို ကြံဆောင်ကြမလဲ …။ မိခင်ရင်းဟာ သူ့သားငယ်ကို သနားသလို လူထုကို သနားသဖြင့် မေတ္တာထားပြီး ကယ်တင်မဲ့သူကိုသာ ကျမတို့(ပြည်သူလူထုဟာ) အလိုရှိပါတယ်။
တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်ရင် …ပြည်ချစ်စစ်သားလို့ အမည်တပ်စရာ မလိုပါဘူး။ ချစ်တယ်ဆိုတာ လူသိအောင် ပါးစပ်ကအော်နေ လက်ကရေးနေလို့က အလကားပါပဲ။
တိုင်းပြည်ကို ရယူပိုင်ဆိုင်လိုစိတ် (တဏှာ လောဘစိတ်) နဲ့တော့ မချစ်ပါနဲ့ …. တိုင်းပြည်အပေါ်ကို မေတ္တာထားပါ … လူထုကို သနားပါ … လို့ပဲ ကျမကတော့ ပြောချင်မိပါတယ်။
Posted by မေဓာဝီ at 3:54 PM 15 comments
Posted by မေဓာဝီ at 5:11 AM6comments
ဒီနေ့တော်တော်ကို အလုပ်များလို့ ဘာမှကို တွေးချိန်လဲမရ၊ ရေးချိန်လဲမရပါဘူး။
တကယ်တော့ ဒီနေ့ဟာ ကျမရဲ့ ၁၀၀ ခု မြောက်ပို့စ်တင်ရမဲ့ နေ့မို့ ကောင်းကောင်းကန်းကန်းလေး ရေးချင်မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ များလိုက်တဲ့အလုပ်က ခုမှ လက်စသတ်နိုင်ပြီး ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ စာတွေကိုလဲ ရုတ်တရက်ချရေးဖို့ မတတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ပြီး ဟိုကြည့် ဒီကြည့် ကြည့်တော့ အိမ်ရှေ့လမ်းမကြီးထက်က မျဉ်းကျားလေးကို သွားတွေ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ရေးစရာရသွားခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။
မနေ့က ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်ရတာ ညောင်းတာနဲ့ ပြတင်းကနေ လမ်းမထက်ကြည့်လိုက်တော့ အိမ်ရှေ့ကလမ်းမမှာ မျဉ်းကျားအသစ်ဆွဲဖို့ ပြင်ဆင်နေကြတာကို တွေ့ရတယ်။ နဂိုကဆွဲထားတဲ့ မျဉ်းကျားအဟောင်းကတော့ မှိန်ပျပျပဲ ကျန်တော့တယ်လေ။
မျဉ်းကျားသာဆွဲနေတာပါ … လမ်းကတော့ တညီတညာခင်းထားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် မိုးတွင်းလောက်ကတည်းက လမ်းရဲ့ တခြမ်းကို ၃ ပုံပုံပြီး တပုံခြင်း ခင်းနေကြတာ ဒီနှစ်ဆောင်းကုန်လို့ နောက်တနှစ်ကူးတော့မယ်။ လမ်းက ၃ ပုံ ၂ ပုံပဲ ခင်းရသေးပါတယ်။
(အပေါ်ကပုံမှာ မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ၊ မျဉ်းကျားမဆွဲခင်က ကျမတို့ရဲ့ ဧည့်သည်တော်ကြီး ကိုမိုက်ကယ်ရိုက်သွားခဲ့တဲ့ပုံပါ။)
စစချင်း ၃ ပုံ ၁ပုံ ကို ဘယ်လိုခင်းလဲဆိုတော့ အလယ်ပလက်ဖောင်းတုံးနားကပ်နေတဲ့ ဟိုဘက်ခြမ်း ၃ ပုံ ၁ပုံ ဒီဘက်ခြမ်း ၃ ပုံ ၁ပုံ ကိုပဲ coated လုပ်ပြီး ခင်းထားတယ်။
ဆိုတော့ ခင်းထားတဲ့လမ်းက တော်တော်လေးမြင့်တက်နေပါတယ်။ ကားတွေအနေနဲ့ သိပ်မသိသာပေမဲ့ ဆိုင်ကယ်တို့၊ စက်ဘီးနဲ့ ဆိုက်ကားတို့ ညဘက်သွားတဲ့အခါ တော်တော်လေး ဒုက္ခရောက်ကြတယ်။
ဆိုင်ကယ်တစီးဆို မှောက်တော့မလိုတောင် ဖြစ်သွားသေးတယ်လို့ ပြောကြတယ်။
ကျမနဲ့ ကြုံရတာကတော့ နေ့ခင်းကြောင်တောင် လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ အဖွားကြီးတယောက်ပါ။
တနေ့ အဖေနဲ့ကျမ ခြံထဲမှာလမ်းလျှောက်ရင်း စကားပြောနေတုန်း အဲဒီမျဉ်းကျားနားကပဲ အဖွားကြီးတယောက် လမ်းကူးနေတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ကူးသွားရင်း လမ်းခင်းထားလို့ မြင့်တက်နေတာကို မမြင်ဘဲ ခလုတ်တိုက်ပြီး မှောက်ရက်လဲပါလေရော။ ကျမနဲ့ အဖေ ကမန်းကတန်းပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာ ဆိုက်ကားတစီးက သူ့အနားရောက်နေပြီး အမြန်ဘရိတ်အုပ်ရပ်လိုက်ပါတယ်။ လဲကျနေတဲ့အဖွားကြီးကို ကျမတို့နဲ့အတူ ဆိုက်ကားဆရာကပါ ၀င်ထူပေးတယ်။ လမ်းတဖက်က ပလက်ဖောင်းပေါ်ထိရောက်အောင် အဖွားကြီးကို အဖေနဲ့ ကျမ တွဲခေါ်လမ်းကူးပေးလိုက်ရတယ်။ တော်ကြာ ဟိုဘက်တခြမ်းက အနိမ့်အမြင့် မညီညာတဲ့နေရာမှာ ထပ်ချော်လဲ နေမှာစိုးလို့ပါ။ နေ့ခင်းဘက် ကားအသွားရှင်းနေလို့သာ တော်တော့တယ်။ မဟုတ်ရင် အရှိန်နဲ့ မောင်းလာတဲ့ကားဆို အဖွားကြီး မလွယ်ပါဘူး။
တကယ်လို့သာ အဖွားကြီး အဲဒီလိုနဲ့ (မပြောကောင်းမဆိုကောင်းပေါ့လေ) ကားတိုက်မိရင် … ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိလဲလို့ ကျမတွေးနေမိတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကားသမားပဲ ပြဿနာအရင်တက်မှာပါ။
အဲဒီလိုနဲ့ ရက်ပေါင်းများစွာ တော်တော်လေးကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ နောက်ထပ်သုံးပုံတပုံကို ထပ်ပြီးလာခင်းသွားပြန်ပါတယ်။
ကျန် တပုံကိုတော့ ချန်ထားကြတာ ခုချိန်ထိပါပဲ။ ဘာလို့များ ခုလိုအချိန်ဆွဲပြီး လုပ်နေကြတာပါလိမ့် …နော်။
အခုပြတင်းပေါက်ကလှမ်းကြည့်တော့ မနေ့ကမှ ဆွဲထားတဲ့ မျဉ်းကျားအသစ်စက်စက်လေးဟာ အ၀ါရောင် မှိန်ဖျော့ဖျော့နဲ့ မဆွဲထားလေသည့်အတိုင်းပါပဲ။ ဆေးဝါ၀ါတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပါလိမ့်။ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ကားဘီးတွေဆီပဲ ပါကုန်သလား…။ ဒါမှမဟုတ် … မျဉ်းကျားလာဆွဲကြသူတစုရဲ့ အိတ်ထဲပဲရောက်ကုန်သလား … ။
Posted by မေဓာဝီ at 10:00 AM6comments
အခုကဗျာလေးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၃၀ လောက်က အဖေရေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ကဗျာလေးပါ။
ဇာတ်နာမည်နဲ့ ဇာတ်ရဲ့အကြောင်းအရာကို တိုတိုနဲ့လိုရင်း တချက်ချင်း ဖော်ပြရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။
ဒီကဗျာကို သီချင်းအဖြစ် အဖေ့မိတ်ဆွေတဦးက ဂီတသံစဉ်သွင်းပေးပြီး ကျမရဲ့ ချစ်လှစွာသောအမကြီးကို သီဆိုစေကာ တချိန်က ရေဒီယိုမှ အသံလွှင့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ကြပါအုံး။
(ဝေဿန္တရာမင်းကို ၀စ်သန်တရာမင်း - ဟုဖတ်ပါရန်)
Posted by မေဓာဝီ at 7:45 AM 8 comments
ခုတလော အဖေနဲ့ကျမ ကော်ဖီချိန်လေးတွေမှာ လဖက်ရည်ဆိုင်မထိုင်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီ။ အဖေလဲ သူ့အလုပ်နဲ့သူ ရှုပ်နေ … ကျမလဲ ကိုယ့်ကိစ္စနဲ့ကိုယ် မအားတဲ့အတွက် နှစ်ယောက်ဆုံပြီး မသွားဖြစ်ကြဘူး။ ကျမကတော့ အိမ်မှာပဲ အလုပ်လုပ်ရင်း ကော်ဖီဖျော် သောက်သလို အဖေကလဲ ကြုံတဲ့နေရာမှာပဲ သောက်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တနေ့ကတော့ ကော်ဖီချိန်လေးမှာ အဖေက ကျမအတွက် ကောက်ညှင်းပေါင်းတထုပ် လူကြုံနဲ့ ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကောက်ညှင်းပြန်ပေါင်း ပူပူလေးပါ။ ခြစ်ထားတဲ့ အုန်းသီးဖတ်လေးတွေဖြူးထားပြီး နှမ်းထောင်းနံ့ကလေးကလဲ သင်းနေတာပါပဲ။
ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ ကော်ဖီသောက်နေရင်း ကျမတို့အိမ်မနီးမဝေးကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နှစ်စဉ် ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ ဘယာကြော် အလှူပြုတာကို သတိရမိတယ်။ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က အလှူဖိတ်စာမှာ ကောက်ညှင်းပေါင်းကို ကောင်းခြင်းပေါင်းလို့ ကွင်းစကွင်းပိတ်နဲ့ ရေးပါတယ်။ ကောင်းခြင်းတွေပေါင်းစုစေမဲ့ အတိတ်နိမိတ်နဲ့ပေါ့။ ဘယာကြော်ဆိုတာလဲ ဘေးဘယာတွေ ကျော်လွှားနိုင်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပါသတဲ့။
အတိတ်နိမိတ် အယူအစွဲအလမ်းကြီးတဲ့နေရာမှာ ကျမတို့လူမျိုးတွေကို ဘယ်သူမှ မမီနိုင်ဘူးလို့ ခပ်ကြွားကြွား တွေးမိပါသေးတယ်။ အယူတော်မင်္ဂလာဦးနိုး ဆိုရင် ဒီ အတိတ်၊ နိမိတ်၊ တဘောင်၊ စနည်း၊ ဘဝေါ တွေနဲ့ပဲ ဘုရင် (ဘိုးတော်ဘုရား) ရဲ့ သူကောင်းပြု မြှောက်စားခြင်း ခံခဲ့ရတာ မဟုတ်လား။ ရှေးအစဉ်အဆက် ဒီလို အတိတ် နိမိတ်တွေ ကောက်လာတော့လဲ ခုချိန်ထိ ဒါတွေကို လက်ခံကျင့်သုံးကြတာ အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ကျမသူငယ်ချင်းတယောက် အမေရိကန်ဗီဇာဝင်ခါနီး ဗေဒင်သွားမေးပါတယ်။ ဟိုက သူ့ကို ဘယ်လို ယတြာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ အမေရိကန် ကောင်စစ်ဝန် အင်တင်တင်မဖြစ်အောင်လို့ အင်ဖက် ကို စီးဆင်းနေတဲ့ ရေထဲမျှောပါတဲ့။ ရယ်တော့ ရယ်ရသား။ သူငယ်ချင်း အကူအညီတောင်းတာနဲ့ သူနဲ့ကျမ အင်ဖက် ရှာပုံတော် ထွက်ရပါတယ်။
‘နင်ကလဲ … ခုခေတ်မှာ ဖက်တို့ဘာတို့ သိပ်မှ မသုံးကြတော့တာ၊ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေနဲ့ပဲ ထည့်ကြတဲ့ဟာကို … အဲဒီတော့ နင် အင်ဖက်အစား ကျွတ်ကျွတ်အိတ်လေး ရေထဲမျှောပါလား ဟ … ၀ယ်ရတာလဲ လွယ်တယ်’
ကျမက သူ့ကိုခပ်နောက်နောက် ပြောမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်တထောင် ဆိပ်ကမ်းနားက သစ်သီးသည်တွေ ဆီမှာ အင်ဖက်ရခဲ့ပါတယ်။ ပိုက်ဆံပေး ၀ယ်မယ်ဆိုတာကို ဈေးသည်က အလကားပေးလိုက်တာပါ။ သူလဲ လွှင့်ပစ်ရမဲ့အတူတူဆိုပြီး ပေးလိုက်တာ ထင်ပါရဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ ကျမသူငယ်ချင်းဟာ အင်ဖက်ကြီး ရေထဲမျှောပြီး အမေရိကန်ဗီဇာ ၀င်ပေမဲ့ ကောင်စစ်ဝန်က အင်’ လိုက်တာပါပဲ။ ကြည့်ရတာ အလကားရတဲ့ အင်ဖက်မျှောမိလို့ လား မသိပါဘူး။
မအင်’အောင် အင်ဖက်မျှောတာကိုတွေးမိရင်းနဲ့ သီချင်းတပုဒ် သတိရမိပါတယ်။
‘ကြာတာတွေကို မကြာစေဖို့ .. ကြာတွေလှူပြီး ဆုတောင်းမယ်’ ဆိုတဲ့ ခိုင်ထူးရဲ့ သီချင်းလေးပါ။
ကျမသူငယ်ချင်းက မအင် အောင် အင်ဖက် မျှောပြီး ခိုင်ထူးကတော့ မကြာစေဖို့ ကြာလှူပါတယ်။
တချို့ကတော့ ကြာစေချင်လို့ ကြာပန်းကြီးတွေလုပ်တာကို တွေ့ရတယ်။
ဟိုအရင်ကတော့ ‘ပြောင်းဖူး …ပြုတ်ဖူး’ ယတြာဆိုတာ ကြားခဲ့ဖူးတယ်။ အခုတော့ ကြာပန်း ယတြာပေါ့။
အဲဒီ ကြာပန်းကလဲ ဇာတ်လမ်းနဲ့ပါပဲ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိပါဘူး။ ကြားမိတာလေး ပြောပါတယ်။
အသစ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ မြို့တော်ရဲ့ အထင်ကရ လမ်းခွဆုံမှာ ကြာပွင့်ပုံကြီး ပြုလုပ်ဖို့ စေခိုင်းပါသတဲ့။
ကြာပွင့်ပုံ ထုလုပ်တဲ့ ဆရာဟာ လက်ရာအလွန်မြောက်ပြီး အလွန်လှတဲ့ ကြာပွင့်ကို ပြုလုပ်ပေးလိုက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ချက်ချင်းပဲ ပြန်ဖျက်ခိုင်းလို့ ဖျက်လိုက်ရတယ်တဲ့။
ဘာကြောင့်လဲ ….. ။
လက်ရာအလွန်မြောက်တဲ့ ကြာပွင့်ပုံမှာ ကြာဖူးတွေပါ ပါ နေလို့တဲ့လေ …။ ကြာ ဆိုတာကလဲ အပွင့်ရော အဖူးပါ ပါမှ လှတာမဟုတ်လား။ အဲ … ကြာဖူး ဆိုတော့ မကြာတော့ဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်နေတဲ့အတွက် … ဆိုလား ….ပြန်ဖျက်ပြီး အသစ်ပြန်လုပ်ရပါသတဲ့ … ။
အဲ ….. အဲသလို ကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခုတော့ အဲဒီဒေသမှာ အဖူးမပါ အပွင့်သက်သက် ကြာပန်းပွင့်ကြီး ငွါးငွါးစွင့်စွင့် ကြွားကြွားဝင့်ဝင့်နဲ့ လမ်းခွဆုံအလယ် ထည်ဝါနေလေရဲ့။
သြော် …. ကျမတို့လူမျိုး အတိတ် နိမိတ် အစွဲ အလမ်း ကြီးပုံများ … နော်။
ကျမလဲ ဟိုတွေးဒီတွေး တွေးရင်းနဲ့ စားလိုက်တာ ကောက်ညှင်းပေါင်းတထုပ် ကုန်သွားပါရောလား။ ကောက်ညှင်းပေါင်းစားရင်းတွေးမိတဲ့အတွက် ကောက်ညှင်းပေါင်းအတွေးလို့ အမည်တပ်လိုက်ပါတယ်။
ကောက်ညှင်းပေါင်းအတွေးဆိုတော့လဲ … ခပ်စေးစေးပေါ့။
Posted by မေဓာဝီ at 6:03 AM7comments
တမြန်မနေ့လောက်က မဂ္ဂဇင်းနဲ့ ဂျာနယ် တစောင်မှာ operation ပိုင်း တာဝန်ယူလုပ်ပေးနေတဲ့ လူငယ်လေး တယောက် ကျမတို့ဆီကို လမ်းကြုံလို့ ၀င်လာပါတယ်။ သူနဲ့ စကားစမြည်ပြောရင်း သူတို့ဂျာနယ် အခြေအနေ မေးကြည့်မိတယ်။ အဲဒီဂျာနယ်က အလှအပ ဖက်ရှင် ကဏ္ဍတွေကို ဦးစားပေးတဲ့ ပေါ့ပ် ဂျာနယ်တစောင်ပါ။ စထုတ်ကတည်းက ခုချိန်ထိ ရှုံးတာ သိန်း ၄၀၀လောက်ရှိနေပြီ လို့ သူက ညည်းတွားရင်းပြောတယ်။ အဲဒါလည်း ထုတ်လုပ်သူက အားမလျှော့သေးဘူး ဆက်ထုတ်နေတုန်းပါပဲ .. တဲ့။
အခုအချိန်မှာ ပေါ့ပ် ဂျာနယ်တွေ သိပ်မပေါက်တော့ဘူး။ သတင်းဂျာနယ်တွေရဲ့ ခေတ်ဖြစ်နေပြီ၊ ဂျာနယ်ဈေးကွက် ထဲမှာ အားကစားဂျာနယ် နဲ့ သတင်း ဂျာနယ်တွေသာ နေရာယူ ထားကြတာ ... စသဖြင့် သူနဲ့ကျမ ပြောမိကြ ပါတယ်။
သူပြန်သွားတော့ ကျမတယောက်ထဲ တွေးနေမိတယ်။
သတင်းဂျာနယ်တွေကို လူတွေ ဘာဖြစ်လို့ ဖတ်ကြတာလဲ။
ကျမတို့တွေဟာ သတင်း သိပ်ငတ်မွတ် ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နေရာ အနံှ့အပြားက သတင်းတွေ၊ မြန်မာပြည် အရပ်ရပ်က သတင်းတွေ သိပ်သိချင်ကြတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ သတင်း၊ တိကျတဲ့ သတင်း၊ အကျိုးရှိတဲ့ သတင်းတွေ သိပ် တောင့်တမိ ကြပါတယ်။
ကျမတို့ တိုင်းပြည်မှာ ထုတ်ဝေနေတဲ့ သတင်းစာ ဆိုတာကလဲ လူထု နှစ်သက် လိုလား တောင့်တတဲ့ သတင်းတွေ မက်မောလောက်အောင် မပါလေတော့ အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်က သတင်းတွေကိုပဲ တခုတ်တရ အာသာပြေ ဖတ်ကြရတော့ တာပေါ့။ ဒါကြောင့်လဲ သတင်းဂျာနယ်တွေဟာ ပေါ့ပ် ဂျာနယ်တွေထက် လူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု ပိုရတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီဂျာနယ်က သတင်းတွေဆိုတာလဲ စိစစ်ပြီးမှ ဖော်ပြခွင့်ရကြတဲ့ သတင်းတွေပါပဲ။ လွတ်ရာ လွတ်ကြောင်း လေးတွေသာ ရေးသားရဲ ဖော်ပြရဲကြပါတယ်။ ဟိုတလောက အာရှရဲ့ ဟီးရိုးတွေ သတင်းကို ဖော်ပြတဲ့ ဂျာနယ်တစောင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ နာမည်မထည့်ရဲဘဲ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နာမည်သာ ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဒါဟာ ရေးသူ (သို့) အယ်ဒီတာက စိစစ်ရေး ကပ်ကြေးစာလွတ်အောင် ဖော်ပြတာလဲ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်သလို စိစစ်ရေးက ဖြတ်လိုက်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ မီဒီယာလောကမှာ ခုချိန်ထိ သတင်း လွတ်လပ်ခွင့် မရှိသေးဘူး ဆိုတာတော့ ဒီသတင်းကိုကြည့်ရင် သိသာ နေတာပါပဲ။
သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးနေရင်းနဲ့ ‘ကြေညာ’ ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးကိုပါ ထည့်ပြောချင်လို့ ကြားဖြတ် ပြောပါရစေအုံး။ သတင်းကြေညာတယ် ဆိုရင် ကြေညာလို့ သုံးကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ကြေညာဆိုတာ အကြေ+အညာ နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ စကားလုံးပါ။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း အကြေ ဆိုတာ အောက်အရပ်၊ အညာ ဆိုတာ အထက်အရပ် ဆိုတော့ ... ထက်အောက် ၀န်းကျင် ပျံ့နှံ့အောင် ပြုလုပ်တာဟာ ကြေညာတာပေါ့။ ဒါကြောင့် သတင်းဆိုတာ ကြေညာရမယ်။ ပျံ့နှံ့အောင် ပြုလုပ်ရမယ်။ အမှောင်ချ ထားလို့ မရဘူး။ ဖုံးဖိထားလို့ မရဘူး။
တချို့က ကြော်ငြာနဲ့ ကြေညာ မှားပြီးသုံးလေ့ရှိကြတယ်။ ကြော်ငြာက...ကြော်ကြားအောင် ငြာသံပေးတာ ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ အရင်ခေတ်က စာနယ်ဇင်းတို့ ရေဒီယို ရုပ်သံတို့ မရှိတဲ့အတွက် (ဥပမာ-အငြိမ့်ပွဲ ဇာတ်ပွဲ ပြသမယ်ဆိုရင်) ဗျို့ဟစ်ပြီး မောင်းခတ် ကြော်ငြာကြရပါတယ်။
ကြော်ငြာနဲ့ ကြေညာကိစ္စကို ဒီတွင်ရပ်ပြီး သတင်းအကြောင်း ပြန်ဆက်ပါအုံးမယ်။
သတင်းကို အင်္ဂလိပ်လို NEWS လို့ပြောတာ တိုတိုတုတ်တုတ်နဲ့ ထိမိလှတယ်။ ဘာကြောင့် ဆိုတော့ NEWS ဆိုတာဟာ North, East, South, West ရဲ့ acronym မဟုတ်လား။ ဒီတော့ NEWS ဟာ အရှေ့ အနောက် တောင် မြောက် အရပ် လေးမျက်နှာက အဖြစ်အပျက်တွေကို ဖော်ပြခြင်း။ မြန်မာ မှာတော့ အကြေ အညာ ထက်အောက်ဝန်းကျင်က အဖြစ်အပျက် တွေကို ဖော်ပြခြင်းသည် သတင်း။
ကျမနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဂျာနယ်လစ် တယောက်က ပြောဖူးပါတယ်။ သတင်းဆိုတာ စတုဒိသာ တဲ့။ အဲဒီစကား ကျမ တော်တော် သဘောကျတယ်။ စတု ဆိုတာ ၄၊ ဒိသာ ဆိုတာ အရပ် … ဆိုတော့ကာ စတုဒိသာ ဆိုတာ အရပ် လေးမျက်နှာပေါ့။၊ အင်္ဂလိပ်လို news,မြန်မာလို သတင်း, ပါဠိလိုတော့ စတုဒိသာ ပေါ့။ ဟုတ်တော့လဲ ဟုတ်နေတာပဲ။
စတုဒိသာ (စတုဒီသာ)ကျွေးတယ်ဆိုရင် လာသမျှလူ အလကားကျွေးတယ် လို့သာ ယေဘုယျ သိထားကြ ပါတယ်။ အရပ် လေးမျက်နှာက လာသမျှလူ အဖြူအမည်း မခွဲခြားဘဲ လှူဒါန်းတာဟာ စတုဒိသာ အလှူပေါ့။ နောက်ပိုင်းတော့ စတုဒိသာကို အရပ်လေးမျက်နှာလို့ မမှတ်ကြတော့ဘဲ အလှူလုပ်တာကိုပဲ စတုဒိသာ ခေါ်သလိုလို တွင်သွားပါတယ်။ တကယ်တမ်း သူပြောသလိုဆိုရင် သတင်းဆိုတာ စတုဒိသာ ပါပဲ။
အဲဒီလို အရပ် လေးမျက်နှာက သတင်းတွေကို ကျမတို့တွေ မှန်မှန် ကန်ကန် သိလိုကြတယ်။ အခု ကျမတို့မှာ အင်တာနက် ဆိုတာကြီး အသုံးပြုခွင့်ရတဲ့အတွက် သတင်းတွေ အရင်ထက် ပိုသိလာတယ်။ ကျမတို့ လက်ရှိ သတင်းစာ ထဲက သတင်းတွေနဲ့ မတူတဲ့ သတင်းတွေကို ဖတ်ရ မြင်ရတဲ့ အခါမှာ … သတင်း မှန်ကန်ခြင်းရဲ့ အရသာ၊ သတင်း လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ အနှစ်သာရကို တစတစ သိလာ ခံစားတတ် လာခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်သိလာ သလို သူတပါး ကိုလည်း သိစေချင် လာခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် သတင်းကို စတုဒိသာ အလှူလုပ်သလို လုပ်ကြရရင် မကောင်းဘူးလားလို့ စဉ်းစားမိတယ်။
တချို့ကတော့ ဒီလို သတင်းမှန်တွေ ဖော်ပြတာကိုပဲ အမနာပ ပြောလား ပြောကြပါရဲ့။ သူတို့ နားမလည်လို့ ပြောကြတာ …ပြောပါစေ။ နောက်တော့ အမှန်ကိုသိသွားကြမှာပါ။ အမှန် တရားဟာ လတ်တလော မှာတော့ ခါးသီးသယောင်ယောင်ပေါ့။
ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ … ကျမတို့ဟာ မှောင်ချထားထဲ အခန်းလေး တခုထဲ နေနေကြရတဲ့ လူတွေလိုပါပဲ။ ဒီအခန်းလေး ထဲက လူတွေ ပြောသမျှပဲကြား,ရေးသမျှပဲဖတ် နေခဲ့ရတယ်။ အမှန်နဲ့ အမှား ဆိုတာလဲ မှောင်နေတော့ ရုတ်တရက် ဘယ်ခွဲခြားနိုင်အုံးမလဲ။ အမှောင်ထဲမှာ ယဉ်နေတဲ့ မျက်စိဟာ အမှောင်ထဲမှာလဲ ၀ိုးတ၀ါးတော့ မြင်သယောင်ယောင် ဖြစ်နေတာပါပဲ။ နေသားကျနေပြီဆိုတော့လေ…။
အခန်းပြင်မှာ အလင်းရောင်အောက်က လူတွေ ရှိနေပါတယ်။ ကျမတို့ အခန်းလေးရဲ့ တံခါးပေါက်ကို ပွင့်သွားအောင် အပြင်ကလူ တချို့က ကြိုးစားပမ်းစား ဆွဲဖွင့်ပေးနေကြပါရဲ့။ အခန်းထဲက ကျမတို့လို လူတချို့ကလဲ ဖယောင်းတိုင် မီးလေးတွေနဲ့ တံခါးပေါက်ရှိရာကို စမ်းတ၀ါးဝါး သွားလို့ပေါ့။ တံခါးပေါက်နား ရောက်နှင့် နေသူ တချို့ကလဲ ပွင့်လိုပွင့်ငြား အားစိုက် တွန်းဖွင့်နေကြဆဲပါ။ တွန်းဖွင့်ရင်း တချို့လဲ ခြေကုန် လက်ပမ်း ကျလိုကျ …။ တချို့ ဘ၀တွေ ဆုံးပါးသွား … ။
တချို့ကတော့ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို မျက်စိ စုံမှိတ်ပြီး ချောင်မှာထိုင်၊ တချို့ကလဲ ဒီတံခါးကြီး ခိုင်သထက် ခိုင်အောင် ကြိုးစား …. ….. ။
ဒီလိုနဲ့ ရုတ်တရက် တံခါးပွင့်သွားလို့ အလင်းနဲ့ တွေ့လိုက်ရမယ် ဆိုရင် … မျက်စိ ကျိန်းပြီး လောလောဆယ်တော့ ဘာမှ မမြင် သလိုလိုတောင် ဖြစ်ချင်ဖြစ်အုံးမှာပါ။ အကူးအပြောင်း ဆိုတာ ခဏတော့ အသားမကျ မှုလေးတွေ ရှိစမြဲ မဟုတ်လား။ နောက်တော့လဲ အမှန်တရားရဲ့ အရသာ အလင်းရောင်ရဲ့ အကျိုး ကျေးဇူးကို တဖြည်းဖြည်း သိသွား လက်ခံသွားကြ မှာပါလို့ ကျမ ကတော့ ယုံကြည်မိ ပါတယ်။
ကျမတို့ အခန်းလေးရဲ့ ပိတ်ထားတဲ့ တံခါးကြီး ပွင့်မဲ့နေ့ … ကျမတို့ အားလုံး လုံလောက်တဲ့ အလင်းရောင် ရရှိမဲ့ နေ့ကို မျှော်လင့် စောင့်စားရင်း ….။
Posted by မေဓာဝီ at 4:57 AM 24 comments
မနေ့က ကျမ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်ပြီး ထုံးစံအတိုင်း အလုပ်လုပ်ရင်း ဂျီတော့ခ်နေစဉ်မှာပဲ ဧည့်သည်လာလို့ ကျမကို လာခေါ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဧည့်သည်က အဖေ့ဆီလာတာပါ။ အဖေ မရှိတဲ့အတွက် အဖေ့ကိုယ်စား ကျမက သွားတွေ့ရမှာ။ ဧည့်သည်က ဘုန်းကြီးတပါးလို့ ပြောတာနဲ့ ခေါင်းထဲမှာ ဘယ်ကဘုန်းကြီးဖြစ်နိုင်မလဲ အပြေးအလွှားစဉ်းစားမိတယ်။
တလတခါလိုလို အလှူလာခံနေကြ ဦးဇင်းကြီးလား၊ တနှစ်တခါလောက် ရောက်ရောက်လာတတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်က ဦးဇင်းလေးလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဟိုတနေ့ကလာသွားတဲ့ အဖေ့တပည့် ဦးဇင်းလတ်လား၊ တွေးရင်း အောက်ထပ်ကိုဆင်းသွားတော့ ကျမထင်တာ တခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျမတို့ဆီ တခါမှ မလာဖူးပေမဲ့ ကျမတို့ အိမ်နားက ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ အဖေ အသက် ၇၀ကျော် ၈၀ နားနီး တောထွက် ဘုန်းကြီးကြီးပါ။
ကျမ အောက်ထပ်ဆင်းသွားချိန်မှာ ဘုန်းကြီးက ကွန်ပျူတာရိုက်တဲ့ကလေးမလေးနဲ့ စကားတွေပြောနေပါတယ်။ ပါဠိရိုက်တတ်လား။ စာစီရင် တမျက်နှာဘယ်လိုယူလဲ၊ ဘာတွေရိုက်နေလဲ … စသဖြင့် မေးနေတော့ ဘုန်းကြီးနဲ့ စကားသိပ်မပြောတတ်တဲ့ ကလေးမလေးလဲ ဟုတ်ကဲ့တွေရော တင်ပါ့တွေရော ရောက်တတ်ရာရာတွေ ပြန်ဖြေနေလေရဲ့။
ဒါနဲ့ ကျမရောက်သွားတော့ ဘုန်းကြီးက …
‘မရှိပါဘူး ဘုရား … အပြင်သွားနေပါတယ်’
‘တင်ပါ့ … သိပါတယ်ဘုရား’
‘အေး … နင့်အဖေ မရှိရင် နင့်ကိုပဲမေးတော့မယ်၊ စာအုပ်တအုပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ကစ လုပ်ရတုန်း’
‘ကွန်ပျူတာ စာစီရပါမယ် ဘုရား’
‘မဟုတ်ပါဘူး ဘုရား … ဖလင်ရိုက်ရပါအုံးမယ် … ဖလင်ရိုက်ပြီးမှ …’
‘အေးအေး .. အဲဒါ အသာထား … ကွန်ပျူတာစာစီရင် တဖောင်ကို ဘယ်လောက်ကျမလဲ’
‘စာအုပ်က ဘယ်ဆိုက်လဲဘုရား … ၁၆ ချိုးလား၊ ၈ ချိုးလား’
ဆိုတော့ ဘုန်းကြီးက နားမလည်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ စက်ခန်းထဲက နမူနာ စာရွက်တရွက်ယူပြီး
‘ဒါဆိုရင် ၈ ချိုးဘုရား .. တဖောင်ကို ၈ မျက်နှာ၊ ၁၆ ချိုးဆိုတာက ၀တ္ထုစာအုပ်ဆိုက်ပါဘုရား … ကွန်ပျူတာစီမယ်ဆိုရင် ……’
စသဖြင့် ကျမ ရှင်းပြလိုက်တော့ …
‘အေးအေး ဟုတ်ပြီ … ဒါကို ဖလင်ရိုက်ရင် တဖောင်ကို ဘယ်လောက်ကျ မတုန်း’
ဆက်မေးပြန်ပါတယ်၊ ကျမလဲ ဖလင်ရိုက်တာနဲ့ ဖလက်တွဲတာ က သူ့နှုန်းနဲ့သူရှိကြောင်း ဒီမှာ မလုပ်ကြောင်းပြောတော့ သူက စက္ကူဖိုးကို မေးပြန်ပါတယ်။
ကျမလဲ နမူနာယူထားတဲ့ စက္ကူကိုပြပြီး …
‘စက္ကူကလဲ ကိုယ်ရိုက်မဲ့ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးအစားစားရှိပါတယ်ဘုရား၊ ဒါက နော်ဝေပါ၊ ချိုင်းနားတို့ ဘားမားတို့လဲ ရှိပါတယ်၊ ဘားမားမှာဆိုရင် ဘားဖြူ .. ဘားပြာ …’
‘တော် ..တော် … ဘာမားမသုံးဘူး၊ ဖြူဖြူချောချော နိုင်ငံခြားစက္ကူဆို ဘယ်လောက်တုန်း’
ဒါနဲ့ တပည့်တော်လဲ .. အဲ .. ကျမလဲ စက္ကူက ဂရမ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးအမျိုးမျိုးရှိကြောင်း၊ ခန့်မှန်းချေ ဘယ်လောက် ဂရမ် ဘယ်ဆိုက်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ ဈေးနှုန်းက တသမတ်ထဲမဟုတ်ဘဲ အတက်အကျရှိကြောင်း …ပြောတဲ့အခါမှာ … ဘုန်းကြီးက
‘တယ် .. ဒီကောင်မလေး .. ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲ … စကားကိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြောတယ်’
ရုတ်တရက်ကြီး ထကောပါလေရော။ ကျမလဲ ဘာမှန်းမသိဘဲ လန့်သွားပြီး …
‘ဈေးနှုန်းဆိုတာ ဘယ်တုန်းက အကျရှိလို့တုန်း၊ အတက်ပဲရှိတာမှုတ်လား … ဘာလဲ အတက်အကျရှိတယ်တဲ့ … မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေ လျှောက်ပြောနေတယ် … ဘာလဲ … နင်အမှန်မပြောရဲဘူးလား … ဖမ်းခံရမှာကြောက်လို့လား’
ဒီတော့မှ ကျမလဲ ရယ်ချင်စိတ်နဲ့ စပ်ဖြဲဖြဲဖြစ်သွားပြီး …
‘မှန်လှပါဘုရား … တပည့်တော်ပြောတာမှားသွားပါတယ် … ဈေးနှုန်းက အတက်ပဲ ရှိပါတယ် ဘုရား’ လို့ ပြန်ပြင်လျှောက်လိုက်တော့မှ ဘုန်းကြီးကျေနပ်သွားပြီး ပုံနှိပ်ခကို ဆက်မေးပါတယ်။
ပုံနှိပ်ခကိုပြောတော့ ဈေးက မလျှော့ဘူးလား တဲ့ … ဘုန်းကြီးက ဈေးဆစ်နေပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကျမက
‘ဈေးကတော့ အလျှော့အတင်း ရှိပါတယ်ဘုရား … အဖေနဲ့သာ ညှိပါဘုရား …’
ဆိုတော့ သူက လာပြန်ပြီလား ဆိုတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကျမလဲ ခပ်မြန်မြန်ပဲ
‘မှားသွားလို့ပါဘုရား …ဈေးက အလျှော့ပဲ ရှိပါတယ်၊ မတင်းပါဘူးဘုရား … အရှင်ဘုရားအပ်ရင် အဖေက လျှော့ပေးမှာပါပဲ’ လို့ ကမန်းကတန်း ပြင်လျှောက်လိုက်တော့မှ ဘုန်းကြီးကြီးလဲ ကျေနပ်စွာနဲ့ ထွက်သွားပါတော့တယ်။
၀ှူး … မလွယ်ပါ့လား …နော် …။
Posted by မေဓာဝီ at 6:03 AM3comments
စာအုပ်ဖတ်လဲ တအုပ်မပြီးခင် နောက်တအုပ် ဖတ်ချင်နေတယ်။ ဖတ်လဲ ဖတ်မိတယ်။
အလုပ်ဆိုလဲ ဒီတိုင်းပဲ၊ တခုမပြီးခင် နောက်တခုကို အစပျိုးထားမိပြန်ရော။
တပြိုင်ထဲနဲ့လဲ အလုပ် သုံးလေးခု လုပ်ချင်လုပ်နေတာ။
ဥပမာ - ဘလော့အတွက်စာရေးရင်း သူငယ်ချင်းနဲ့ ဂျီတော့ခ် နေစဉ်မှာပဲ သီချင်းလဲနားထောင် သူများရေးတဲ့ စာတွေလဲ လိုက်ဖတ်ချင်ဖတ်နေမိတာမျိုးပေါ့။ (အလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီးတွေ ဆိုပါတော့)
ဂနာမငြိမ်ဘူး ဆိုတဲ့ သဘောများလားတော့ မသိပါဘူး။ ရာသီဥတုလဲ သိပ်တော့မပူသေးပါဘူး။ ခုမှ ဒီဇင်ဘာ ရှိသေးတာ။
ထားပါတော့ ကျမရဲ့ ဂနာမငြိမ်မှုအကြောင်းတွေ။
ပြောချင်တာက .. ကျမ လောလောဆယ် ဖတ်နေတဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပါ။
တနေ့ အဖေ့အခန်းမှာ စာအုပ်တွေမွှေဖြစ်တော့ ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ စာအုပ် ၂ အုပ် ဆွဲလာခဲ့ပါတယ်။
တအုပ်က ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းရဲ့ “ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ လက်တွေ့ကျင့်စဉ်” စာအုပ်၊ နောက်တအုပ်ကတော့ သတင်းစာဆရာကြီး ကြေးမုံဦးသောင်းရဲ့ “လက်ငင်းလက်တွေ့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ” စာအုပ်ပါ။
အဲဒီစာအုပ်တွေကို ဖတ်ဖို့ယူသွားမယ်ဆိုတော့ အဖေက တခု သတိပေးပါတယ်။
‘ဖတ်တော့ဖတ်ပါ … အယူမမှားပါစေနဲ့ …’ တဲ့။ အဖေဆိုလိုတာကို ကျမနားလည်တဲ့အတွက် အဖေ့ကို ကတိပေးပြီး စာအုပ်တွေကို ယူလာခဲ့တယ်။
ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ စာအုပ်က အဖိုး(အမေ့အဖေ) ရဲ့ စာအုပ်ပါ။ စာအုပ်ရဲ့ ပထမစာမျက်နှာမှာ အဖိုးက သူ့နာမည် လက်မှတ်ထိုးပြီး နေ့စွဲတပ်ထားတယ်၊ 11/8/60 တဲ့ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၆ နှစ်ကျော်လောက်က စာအုပ်ပေါ့။
ဖတ်ကြည့်တော့ ဟိုဒီ ခုန်ကူးတတ်တဲ့ စိတ်အကြောင်း ရေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ခုလိုတွေ့ရတယ်။
“စိတ်ကလေး၏ ကူးကျော်ပြေးလွှားပုံ အခြင်းအရာမှာ ငယ်စဉ်က ရဘူးသည့် လင်္ကာကလေးတပုဒ်နှင့် တူလှသည်။
သာသည့် လမင်း … စသည်ဖြင့် အတောမသတ်နိုင်အောင် အလိုရှိတိုင်း ဆက်ပေးနိုင်သည့် လင်္ကာတပုဒ်ပေတည်း။ စိတ်သည်လည်း အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် ဥပမာကဲ့သို့ အခြားအရေးကြီးသော အာရုံတခုနှင့် မတိုက်မိမချင်း ရှည်လျားစွာ ကူးကျော်ပြေးလွှားတတ်သည်ကို တွေ့ရသည်။”
စိတ်ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ.. ဟိုရောက် ဒီရောက် ဖောက်ပြန်နေတာ ဆိုတော့ .. ကျမစိတ်တွေ ခုလို တောင်ရောက် မြောက်ရောက် ဖြစ်နေတာ အပြစ်မဆိုသာပါဘူးလေ… လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆင်ခြေပေးမိတော့တာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ “ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် အောက်မှာ အဖိုးက သူ့ရဲ့မှတ်ချက်ကလေးတခုကို လက်ရေးခပ်သော့သော့နဲ့ ရေးထားတာလေး ဖတ်လိုက်ရတယ်။
“Don’t think of Future; Don’t think of Past; Live in the Present.” တဲ့။
အဖိုးက စာဖတ်ရင် under lineတွေ တားလိုတား၊ စတားတွေပြလိုပြ၊ စာအုပ်ရဲ့ လွတ်နေတဲ့နေရာလေးတွေမှာ သူ့မှတ်ချက်လေးတွေ တေးမှတ်လို တေးမှတ် … လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ (နောက်မှ အဖိုးအကြောင်း သတ်သတ်ရေးပါအုံးမယ်)
ဒီစာသားလေးကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ….
အတိတ်ကို ပြန်ကြည့်ပြီး လွမ်းမောလိုက် … မလာသေးတဲ့ အနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီး အားငယ်လိုက်နဲ့ တောင်စဉ်ရေမရ ဖြစ်နေပြီး ပစ္စုပ္ပန်မှာ ဘာမှ ရေရေရာရာ မလုပ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမလို အားမရ ဖြစ်မိသလိုလို … ။
ဒီလိုနဲ့ … ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ ဖတ်နေရင်းက ခဏချပြီး ကြေးမုံဦးသောင်း ရဲ့ စာအုပ်ကို ကိုင်မိပြန်ရော။
အဲဒီ စာအုပ်ရဲ့ နောက်ကျောဖုံးမှာ ရေးထားတဲ့ စာသားလေးတွေ ဖော်ပြပါရစေ။
- အင်းစိန်ထောင်ကြီးထဲ၌ ၂ နှစ်ခွဲ အချိန်ယူ၍ ရေးခဲ့သည်။
- စာအုပ်စာတမ်းပေါင်း ၈၀၀ ခန့်ကို မှီငြမ်းပြု၍ ရေးခဲ့သည်။
- ငရဲမပါ၊ နတ်ပြည်မပါ၊ လက်တွေ့ဘ၀ကိုသာ ရေးခဲ့သည်။
- ပါဠိမပါ၊ သတင်းစာသုံးမြန်မာစာနှင့် ရေးခဲ့သည်။
အဲဒီစာသားတွေကြောင့် စိတ်ဝင်စားမိတာနဲ့ စာအုပ်ကို ခဏကောက်မြည်းမိပါတယ်။
ဘုရားဖြစ်စဉ်တွေ ဘုရားရဲ့ တရားတော်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ မြန်မာလို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထားတာ တွေ့ရတယ်။
တနေရာမှာတော့ မြတ်စွာဘုရား သာသနာပြုပုံကို ခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
“သို့ သာသနာပြုရာ၌ ရံဖန်ရံခါ အတိုက်အခံပြုမှုများကို တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ သို့သော် မှန်ကန်ခြင်း သစ္စာတရားကို လက်ကိုင်ထားသော ဗုဒ္ဓသည်သာ အနိုင်ရသည်၊ သူ၏ အောင်နိုင်ခြင်းမှာ အတိုက်အခံပြုသူကို ရှုံးနိမ့်စေသော အောင်နိုင်ခြင်းမဟုတ်။ အတိုက်အခံပြုသူကို အမှန်ပြကာ သိမ်းသွင်းခြင်းဖြင့် အကျိုးတရားကို ရရှိစေသော အောင်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။”
ဖတ်မိတဲ့ စာအုပ် ၂ အုပ်ထဲက နှစ်သက်မိတာလေးတွေ ကောက်နုတ်ဖော်ပြခြင်းမျှသာပါ။
Posted by မေဓာဝီ at 6:28 AM4comments
Posted by မေဓာဝီ at 5:33 AM 8 comments
Posted by မေဓာဝီ at 6:50 AM 8 comments
Posted by မေဓာဝီ at 4:47 AM4comments
ဟိုးငယ်ငယ် မမှတ်မိခင်အရွယ်တုန်းကတော့ အမေက ဘယ်လိုလိမ်းပေးလဲ မသိပါဘူး၊ ကျမသိတတ်တဲ့အရွယ်မှာတော့ ကျမကိုထိန်းတဲ့ အမကြီးက သနပ်ခါးလိမ်းပေးတဲ့အခါ ပါးတဖက်တချက်မှာ ပါးကွက်ကြီးကြီးကွက် … နှာခေါင်းပေါ်မှာ နှာတံ လိုင်းတလိုင်း ဆွဲပြီး လိမ်းပေးတယ်။
ရေချိုးပြီးတဲ့အခါတိုင်း သနပ်ခါးကျောက်ပြင်နဘေးမှာ သူလိမ်းပေးတဲ့သနပ်ခါးကို မျက်နှာမော့ပြီး အလိမ်းခံရတယ်၊ ကွက်သလား ကြားသလား ညီသလားလဲ မသိဘူး၊ သနပ်ခါးလိမ်းပြီးတာနဲ့ အင်္ကျီဝတ်ပြီး ဆော့ဖို့ပြေးတော့တာပဲ၊ ပါးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ သနပ်ခါးရဲ့ အေးမြမြအရသာကို ကျမ ငယ်ငယ်ထဲက နှစ်သက်ခဲ့တာ ခုချိန်ထိပဲ ဆိုပါတော့…။
ဒီလိုနဲ့ ကျောင်းနေတဲ့အရွယ်ရောက်လာတော့လဲ သူလိမ်းပေးတဲ့ ပါးကွက်ကြားနဲ့ ကျောင်းသွားခဲ့ရတယ်။
ကျောင်းမှာဆရာမစာသင်တာကို လိုက်နားထောင်ရင်း မျက်ခုံးမွေးကြားမှာဝင်နေတဲ့ သနပ်ခါးခြောက်တွေကို လက်သည်းနဲ့ခွါချလို့ သနပ်ခါးဖတ်တွေ တဖွားဖွားကျတတ်တာကိုလည်း မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ အဲဒီအမကြီးက သနပ်ခါးသာလိမ်းပေးတာ မျက်ခုံးမွေးထဲက သနပ်ခါးတွေကို မခြစ်ထုတ်ပေးပါဘူး၊ ကျမကလဲ အဲဒီသနပ်ခါးတွေ ခြစ်ရကောင်းမှန်းမှ မသိဘဲ။ ဒါကြောင့် ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲကျမှ အဲဒီလို ခွါချရတာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ ကိုယ်တိုင်သနပ်ခါးလိမ်းတတ်တဲ့ အရွယ်ရောက်တော့လဲ ပါးကွက် ကွက်တာက အကျင့်ပါနေလို့ သနပ်ခါး လိမ်းတိုင်း ပါးကွက်ကြားနဲ့ပေါ့။
ကျမ ငါးတန်းနှစ်မှာ ကျမတက်နေတဲ့ ကျောင်းကို ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး အသစ်ပြောင်းလာပါတယ်၊ အသစ်ရောက်လာတဲ့ ဆရာမကြီးဟာ တော်တော်စည်းကမ်းတင်းကျပ်တယ်၊ သူ့ရဲ့များပြားလှသော စည်းကမ်းချက်ထဲမှာ သနပ်ခါး ပါးကွက် ကွက်ခြင်းကို ပိတ်ပင်တာလဲ တခုပါဝင်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ ကျမနဲ့ သွားငြိတော့တာပဲ၊ ကျမက နေ့တိုင်းပါးကွက်ကြားနဲ့ ကျောင်းသွားတာကိုး။
ဆရာမကြီးရဲ့ သဘောက ဒီလိုပါ။
ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်က ကျောင်းကြီးတကျောင်းမှာ လာတက်တဲ့ ကျောင်းသူတွေဟာ လယ်ထဲ ကောက်စိုက် ဆင်းတာမဟုတ်ဖူး၊ နေပူစပ်ခါး အုတ်သဲကျောက် သယ်တာလဲမဟုတ်ဖူး၊ ဒါကြောင့် သနပ်ခါးလိမ်းချင်လိမ်း၊ ပါးကွက်မကွက်ရဘူး တဲ့။ ပါးကွက်ကွက်တာ တောသူမတွေမှ ကွက်တာဆိုပဲ။
အဲဒီစည်းကမ်းလဲ ထုတ်ပြီးရော ဂိတ်ပေါက်မှာ ဆရာမတွေ တဖက်တချက် စောင့်နေပြီး ၀င်လာတဲ့ ကျောင်းသူတွေထဲမှာ ပါးကွက်ကွက်တာတွေ့ရင် ရေစိုအ၀တ် စုတ်ဖတ်ဖတ်ကြီးနဲ့ ပါးပေါ်က သနပ်ခါး ပါးကွက်တွေကို ဖျက်ပစ်ပါတော့တယ်။
အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ စည်းကမ်းတွေကိုဆိုရင် မလိုက်နာချင်တဲ့ ကျမဟာ ဒီလိုအစောင့်တွေ တင်းကျပ်နေတဲ့ ကြားက ပါးကွက်ကို မသိမသာလေး ကွက်ဖြစ်အောင် ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ အရှောင် အတိမ်းကောင်းတဲ့အတွက် ကျောင်းကထွက်သည်အထိ တခါမှတော့ အ၀တ်စိုနဲ့ ဖျက်တာမခံခဲ့ရပါဘူး။
တက္ကသိုလ်တက်တော့လဲ ကျမကတော့ ပါးကွက်နဲ့ပါပဲ။ သူများတွေမိတ်ကပ်လိမ်း နှုတ်ခမ်းနီလှလှလေးတွေ ဆိုးကြပေမဲ့ ကျမကတော့ တောဆန်တယ်ပဲပြောပြော ပါးကွက်နှစ်ဘက်နဲ့ ကျောင်းတက်ခဲ့တယ်။
ကျမတို့အိမ်မှာ မိန်းကလေးကများတော့ သနပ်ခါးတုံးတွေ တော်တော်ကုန်ပါတယ်။ ကုန်သွားတဲ့သနပ်ခါး တုံးတွေကို အမေက လွှင့်မပစ်ဘဲ ပြန်ကြိတ်ပြီးတော့ အခဲလေးတွေလုပ်ပြီး လက်တွေခြေထောက်တွေ လိမ်းစေပါတယ်။ အဲဒီအခဲလေးတွေကို ကျမတို့က စက်သွေးခဲ လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အခုတော့ ကျမတို့အိမ်မှာ လူကလည်း နည်းသွားပါပြီ၊ သနပ်ခါးလိမ်းတာလဲ ကျမတယောက်လောက်ပဲ ရှိတော့တယ်။ ကျမ သနပ်ခါးကြိုက်တတ်လို့ သူငယ်ချင်းတွေက သနပ်ခါးတုံးတွေလက်ဆောင်ပေးလေ့ ရှိတယ်။ တယောက်ထဲလိမ်းတော့ တတုံးဆို အကြာကြီးလိမ်းရတာမို့ တော်တော်နဲ့ မကုန်နိုင်ဘူး။ အရင်လို စက်သွေးခဲလဲ မလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။
တကယ်တော့ ကျမတို့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ သနပ်ခါးလိမ်းတာဟာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ ကျမထင်ပါတယ်။
သနပ်ခါးလိမ်းတဲ့နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြန်မာတနိုင်ငံထဲ ရှိပါတယ်၊ (ကြံဖန်ဂုဏ်ယူရတာပါ) သနပ်ခါးလိမ်းတာကို တောဆန်တယ်ပဲပြောပြော ကျမကတော့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတခုလို့ ယူဆပါတယ်။
သနပ်ခါးလိမ်းထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေမြင်ရတာလည်း ရင်အေးစရာကောင်းပါတယ်။
မိတ်ကပ်လိမ်း နှုတ်ခမ်းနီဆိုးထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေလဲ လှကြပါတယ်၊ သူတို့အလှထက်ကို ကျမကတော့ သနပ်ခါးပါးကွက်နဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ အလှကို ပိုပြီး သဘောကျမိပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခုပြန်စဉ်းစားတော့ သနပ်ခါးပါးကွက် မကွက်ရဆိုတဲ့ စည်းကမ်းထုတ်သူ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးကို ကျမအံ့သြမိတယ်။ ကျောင်းသူလေးတွေ သနပ်ခါး ပါးကွက်လေးတွေနဲ့ ကျောင်းတက်ကြတာ ဘယ်လောက်များ မြန်မာဆန်ပြီး ကြည့်လို့ကောင်းလိုက်မလဲ .. လို့၊ ဒါဟာ တောဆန်တာလား၊ လယ်ထဲ ကောက်စိုက်ဆင်းမှ ပါးကွက် ကွက်ရမှာလား … ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ ကျမကတော့ထင်တာပဲ၊
ဆရာမကြီးဟာ မိတ်ကပ်လိမ်းတာကိုတော့ မကန့်ကွက်ဘဲ သနပ်ခါးပါးကွက်ကြားလိမ်းတာကို ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်၊ သနပ်ခါးဟာ တောနဲ့သာအံဝင်ပြီး မြို့ပြယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်သလိုပဲ သူယူဆခဲ့တယ်။
မယဉ်ကျေးဘူးပဲဆိုဆို တောဆန်တယ်ပဲပြောပြော .. ကျမကတော့ အခုချိန်ထိ သနပ်ခါးကို နှစ်သက်မြတ်နိုးစွာနဲ့ သနပ်ခါးကွက် - ပါးမှာ ကူနေဆဲ ပါဘဲ။
Posted by မေဓာဝီ at 9:33 AM6comments
‘နေနဲ့လ …ရွှေနဲ့မြ’ ဆိုတဲ့စကားဟာ တယောက်နဲ့တယောက် လိုက်ဖက်ညီမှုရှိတဲ့အခါများမှာ သုံးစွဲလေ့ရှိကြပါတယ်။
ကျမစဉ်းစားကြည့်မိပါတယ်။ နေ နဲ့ လ ဆိုတာ ကောင်းကင်ထက်မှာ ရှိတာချင်းတူပေမဲ့ နေထွက်ရင် လပျောက်၊ လရောက်တော့ နေကွယ် ရတာမို့ … သူတို့နှစ်ဦး လိုက်ဖက်ညီတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
မြတ်စွာဘုရား ဓမ္မစကြာ တရားဦးကိုဟောတဲ့အချိန်ဟာ နေအ၀င် လအထွက် အချိန်မှာလို့မှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ်၊ တရားဦးဟောပုံကို ပန်းချီနဲ့သရုပ်ဖော်တဲ့အခါမှာလည်း အရှေ့ကောင်းကင်မှာ လမင်းသာနေပြီး အနောက်တောင်စွယ်မှာ နေကွယ်လုလု ပုံစံမျိုးနဲ့ သရုပ်ဖော်ခဲ့ကြတဲ့ ပုံတွေလည်း ကြည့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အဲဒီလို နေနဲ့လ ရဲ့ ဆုံနိုင်ခွင့်အချိန်လေးဆိုတာ လတလမှာလဲ တရက်လောက်ပဲ … တရက်တာမှာလဲ ခဏလေးပါပဲ။
ခဏလေး ရှားရှားပါးပါး ဆုံတွေ့ကြရတဲ့ နေ နဲ့ လ လို လူတွေဟာ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိနေကြပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ အရှေ့ခြမ်းနဲ့ အနောက်ခြမ်းမှာ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ ရပ်တည်နေကြရင်း ဆုံဆည်းခွင့်ကို မျှော်လင့်နေကြတဲ့ ‘နေ နဲ့ လ’ လေးတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေ အကြောင်း …
နေ-လ ပမာ၊ ၀ဠာဘုံထက်၊ ဆုံနိုင်ပါလျက်၊ အတွေ့ခက် …
တွေ့လျက်သာပင်၊ မြင်နိုင်ပါလျက်၊ အကြင်ခက် …
အကြင်နာများ၊ နှုတ်ဖျားရွရွ၊ ဖွင့်ဟလိုလျက်၊ အဆိုခက် …
ဆိုမည့်စကား၊ နှလုံးသားထဲ၊ သိမ်းဆဲ(ဆည်း) ထားလျက်၊ အမေးခက် …
မေးမည့်ပုစ္ဆာ၊ သိနေပါလျက်၊ အဖြေခက် …
အဖြေကိုသိ၊ နှစ်ဦးညှိလဲ၊ ၀မ်းနည်းရလျက်၊ အငိုခက် …
ငိုကြွေးမျက်ရည်၊ ရင်နင့်လေအောင်၊ ပူလောင်ကျွမ်းလျက်၊ အရှိုက်ခက် …
ရှိုက်ငင်ပင့်သက်၊ ရစ်ပတ်နွယ်ငင်၊ သံယောဇဉ်ကို၊ ပြတ်လိုပါလျက်၊ အဖြတ်ခက် …
ဖြတ်မည့်အရေး၊ မတွေးရဲကာ၊ ဝေးခွဲခွါမှ၊ တမ်းတပါလျက်၊ အလွမ်းခက် …
လွမ်းရသော်ငြား၊ နှစ်ဦးသားမှာ၊ ကံကြမ္မာကို၊ မျှော်က်ိုးပါလျက်၊ ယုံရခက် …
ယုံကြည်ချက်ထား၊ အင်အားကိုယ်စီ၊ ညီနေပါလျက်၊ ဆုံဖို့ခက် … ။ ။
Posted by မေဓာဝီ at 4:20 AM6comments
ကျမ ကျောင်းတက်နေတုန်းက စာကျက်ရင် မှတ်မိလွယ်အောင် အတိုကောက်လေးတွေထုတ် ကဗျာလေးလိုလုပ်ပြီး ကျက်လေ့ရှိပါတယ်။ ပထ၀ီ သမိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဘိုင်အိုတို့ဘာတို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီတိုင်းကျက်မဲ့အစား ကဗျာစပ်ပြီးကျက်တော့ မှတ်မိလွယ်တယ်လို့ ထင်တာပဲ။
အဲဒီအကျင့်က အဖေ့ဆီကရတာလို့ဆိုရမယ်။ မနေ့က အဖေ့ကဗျာအကြောင်း တင်ရင်းနဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက ၁၂ လရာသီ ပွဲတော်အကြောင်းကို အလွယ်မှတ်မိအောင် အဖေ ကဗျာလေးရေးပေးခဲ့ဖူးတာ သွားသတိရမိတယ်။
တန်ခူးလ - သင်္ကြန်ပွဲ
နယုန်လ - စာပြန်ပွဲ
၀ါဆိုလ - ၀ါဆိုပွဲ
၀ါခေါင်လ - စာရေးတံမဲပွဲ
သီတင်းကျွတ်လ - မီးထွန်းပွဲ
တန်ဆောင်မုန်းလ - ကထိန်ပွဲ
နတ်တော်လ - စာဆိုတော်ပွဲ
ပြာသိုလ - လွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲ
တပို့တွဲလ - ထမနဲပွဲ
တပေါင်းလ - တပေါင်းပွဲ
ငယ်သေးတော့ ကျက်လိုက် မေ့လိုက်နဲ့ပေါ့။
အဲဒါကို အဖေက မှတ်မိအောင် ဆိုပြီး ခုလို လင်္ကာလေး စပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
တန်ခူး သင်းထုံ၊ ညောင် ကဆုန်
၀ါဆို ထိုပွဲ၊ ၀ါခေါင် မဲ
နတ်တော် - စာဆို၊
လပြာသို .. ရွှင်ချို လွတ်လပ်ပွဲ။
လ တပို့တွဲ ထမနဲ
ဆင်နွှဲ တပေါင်းပွဲ … ။
ဒီလင်္ကာလေးနဲ့ ကျက်လိုက်တော့ ခုထိအောင် မမေ့တော့ဘူး၊ မှတ်မိနေတော့တာပဲ။
အဲဒီလိုပါပဲ .. အဖေက ဇာတ်ကြီး ဆယ်ဘွဲ့တို့ ဘုရားဂုဏ်တော် ၉ ပါး၊ တရားဂုဏ်တော် ၆ ပါး နဲ့ သံဃာ့ဂုဏ်တော် ၉ ပါးတို့ကိုလဲ အဓိပ္ပါယ်တွေ အလွယ်မှတ်မိအောင် စာစပ်ပေးထားပါသေးတယ်။
အဲဒါတွေကိုတော့ နောက် … အားတော့မှပဲ …. ။
Posted by မေဓာဝီ at 7:29 AM2comments
အဖေရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ကြာပြီဆိုပါတော့။
ကဗျာအမျိုးအစားက ၀ဲရိုက်ဝဲသွင်း လို့ အဖေကပြောပြပါတယ်။
၀ဲရိုက်ဝဲသွင်းဆိုတာက ကဗျာရဲ့ အဆုံးပါဒမှာချတဲ့ စာလုံးရဲ့ကာရန်နဲ့ နောက်အစပါဒက စာလုံးရဲ့ကာရန်ကို ချိတ်ယူထားတဲ့ ပုံစံမျိုးကိုပြောတာပါ။
အဲဒီစပ်နည်းကို သဘောကျလို့ ကျမဘလော့မှာတင်ချင်တာနဲ့ ညက အဖေ့ကို ပြန်မေးကြည့်ပြီး လိုက်မှတ်ထားတာပါ။
ကဗျာရဲ့ နောက်ဆုံး စာလုံး “ဇွဲနှင့်ကျင့်” က အစ စာလုံး “မြင့်ခေါင်ထွတ်” နဲ့ ပြန်ဆက်ဆိုလို့ရပါတယ်၊
၀ဲရိုက်ဝဲသွင်း ကဗျာလေး .. ဖတ်ကြည့်ကြပါအုံး။
မြင့်ခေါင်ထွတ် .. .. ..
Posted by မေဓာဝီ at 7:05 AM6comments